Eebbe waa, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Haddii aad weydiin lahayd Ilaah su’aal; taasi waxay noqon laheyd? Malaha mid "mid weyn": sida ku cad qeexitaankaaga ahaanshaha? Maxay dadku u silcayaan? Ama "yar", laakiin mid degdeg ah: Maxaa ku dhacay eeygayga iga cararay markii aan ahaa toban jir? Ka waran haddii aan guursaday gacaliye caruurnimadayda? Muxuu Eebbe cirka ka dhigay buluug? Ama waxaa laga yaabaa inaad uun weyddiisay isaga, "Kumaad tahay?" ama "maxaad tahay?" ama "Maxaad rabtaa?" Jawaabta tan waxay u badan tahay inay ka jawaabto inta badan su'aalaha kale. Ayaa iyo waxa Ilaah yahay iyo waxa uu doonayo waa su'aalo aasaasi ah oo ku saabsan dabeecadiisa, dabeecadiisa. Laga soo bilaabo wax kasta oo kale ayaa lagu go'aamiyaa: sababta caalamku u yahay siday tahay; cidda aan nahay sida dadka oo kale; sababta noloshu u tahay waxa ay tahay iyo sida aan u qaabayn karno. Halxiraalaha ay qof walbaa ka fikireen kahor. Waxaan jawaab u heli karnaa, ugu yaraan ilaa xad. Waxaan bilaabi karnaa fahamka dabeecadda Eebbe. Waxaan xitaa kaqeyb qaadan karnaa dabeecadda rabbaaniga ah, waa wax cajiib ah oo markay dhawaaqaan. Sidee? Iyada oo loo marayo muujinta Eebbe.
Kuwa fikirka ka fikiraya weligood waxay sameeyeen sanamyo kala duduwan oo Ilaah ah. Laakiin Ilaah baa nafsaddiisa noogu muujiyey abuurkiisa, ereygiisa iyo wiilkiisa Ciise Masiix ah. Wuxuu na tusaa qofka uu yahay, waxa uu yahay, waxa uu sameeyo, xitaa, ilaa xad, sababta uu sidaas u sameeyo. Wuxuu sidoo kale noo sheegayaa xiriirka aan la yeelan doonno isaga iyo nooca xiriirkan uu ugu dambeyntii qaadan doono. Shuruud kasta oo aqoonta Ilaahay ah waa mid aqbala, is-hoosaysiin leh. Waa inaan ixtiraamno Ereyga Eebbe. Markaa Ilaah baa nafsaddiisa noo muujiya (Ishacyaah 66: 2) oo waxaan baran doonnaa inaan jeclaano Ilaah iyo jidadkiisa. Ciise wuxuu yidhi, Ku alla kii i jecel, hadalkayguu xajin doonaa, aabbahayna waa jeclaan doonaa isaga, waana u tagi doonnaa oo waannu la degganaan doonnaa (Yooxanaa 14:23). Ilaahay wuxuu rabaa inuu nala noolaado. Markuu taas sameeyo, waxaan had iyo jeer jawaab cad ka helnaa su'aalaheena.
1. Raadinta mid waarta
Dadku waxay had iyo jeer la halgameen sidii loo ifin lahaa asalkooda, ahaanshahooda iyo micnahooda nololeed. Halgankaas ayaa had iyo jeer u horseedaya su’aasha ah in uu jiro ilaah oo ah mid isaga u gaar ah. Markii sidaas la sameeyo, dadku waxay u yimaadeen muuqaalo iyo fikrado kala duwan.
Wadooyin jajaban ayaa dib loogu celiyey xagga Ceeden
Rabitaanka da'da jir ee tarjumaadda ahaanshuhu wuxuu ka muuqdaa dhismayaasha diimeed ee kala duwan ee jira. Jihooyin badan ayaa midba wuxuu isku dayay inuu kusii dhawaado asalka jiritaanka bini aadamka sidaasna waxaa loo qaatay hagida nolosha ee ninka. Nasiib darrose, kartida qofku u leeyahay inuu si buuxda u fahmo xaqiiqda ruuxiga ah waxay kalliftay oo keliya muran iyo su'aalo kale:
Pantheist wuxuu Ilaah u arkaa dhammaan awoodaha iyo sharciyada ka dambeeya cosmos-yada. Iyagu ma rumaystaan ​​Eebbe shaqsi ahaaneedna waxay u tarjumaan wanaag iyo shar sidii rabbaani.
Wadaaddada caabudayaasha ahi waxay rumaystaan ​​ilaah badan. Mid kasta oo ilaahyadan ah way caawin karaan ama dhaawici karaan, laakiin midkoodna awood buuxda ma leh. Sidaa darteed, waa in qof walba la caabudo. Inbadan oo aaminsanaanta Bariga Dhexe iyo Greco-Roomaanka iyo waliba jinniyada iyo dhaqankii awoowayaasha dhaqammo badan oo qabiileed ayaa ahaa ama qaab ahaan qaab ahaan u qaabaysan.
Culumadu waxay rumeysan yihiin inuu jiro shaqsi ahaan asalka, daryeelaha iyo udub dhexaadka wax walba. Haddii jiritaanka ilaahyada kale asal ahaan laga saaray, waa su'aal ku saabsan cawrada, sida lagu muujiyey qaab saafi ah iimaanka aabihii Ibraahim. Seddex diimood oo dunidaa ka baryayaa Ibraahim: Yuhuuda, Masiixiyada iyo Islaamka.
Dhaqan kasta oo taariikhda ku jira wuxuu horumariyey dareen ama xoog badan ama ka yar oo ah in Ilaah jiro. Shakiye qofkii diida Ilaah waligiis wuxuu lahaan jiray waqti adag. Atheism, nihilism, existentialism - kuwani dhamaantood waa iskuday ay ku tarjumayaan adduunyada iyada oo aan lahayn wax awood ah, shakhsiyan u shaqeynaya hal abuurka kaasoo go'aamiya waxa wanaagsan iyo waxa xun. Ugu dambeyntiina, kuwan iyo falsafadaha la midka ah ma bixiyaan jawaab qancisa. Dareen ahaan, waxay ka gudbaan su'aasha aasaasiga ah. Waxa aan runtii rabno inaan aragno waa noocee abuurku abuuraha leeyahay, waxa uu damacsan yahay inuu sameeyo iyo waxa loo baahan yahay inay dhacaan si aan Ilaah ugu noolaano si waafaqsan.
2. Sidee buu Eebbe noogu muujiyey?
Nafsaddaada geli meesha Ilaah. Waxaad wax walba u abuurtay oo uu ku jiro nin. Nin ayaad ka dhigtay suuraddaada (Bilowgii 1: 1-26) oo isaga siiyey awood uu kula yeesho xiriir gaar ah adiga. Miyayna sidoo kale dadka u sheegi doonin wax ku saabsan naftaada? U sheeg waxa aad rabtid inuu sameeyo? Tus tus sida uu ku heli karo cilaaqa aad lahesho Ilaah? Qof kasta oo u qaadata in Ilaah yahay wax aan la garanayn wuxuu ku qanacsanahay in Ilaah ka qarsoon yahay abuurkiisa sabab uun awgood. Laakiin Ilaah baa nafsaddiisa noo muujiyay: abuurkiisa, taariikhda, Kitaabka Quduuska ah iyo wiilkiisa Ciise Masiix. Aynu tixgelinno wuxuu Eebbe ina tusay ficilkiisa muujinta.
Hal abuurka ayaa Eebbe muujiya
Miyuu qof u qalmi karaa cosmos-ka weyn ee uusan dooneynin in uu qirto in Ilaah jiro, in uu gacanta ku haysto xoog dhan gacmihiisa, in uu u oggolaado in kala dambaynta iyo wada noolaanshaha ay ka adkaato? Rooma 1: 20: "Oo ninkaa aan la arki karin ee Ilaah, oo ah xooggiisa daa'imka ah iyo ilaahnimadiisa, ayaa laga arkay shuqulladiisii ​​tan iyo abuurniinta dunida, haddii mid loo arko." Cirka araggiisa wuxuu la yaabay Boqor Daa'uud inuu Ilaahay ula macaamilo wax aad u yar sida nin: "Markaan arko samooyinka, farahaaga, dayaxa iyo xiddigaha aad diyaarisay: waa maxay ninku Ma waxaad u xusuusataa isaga iyo binu-aadmiga oo aad u xannaanaysaa? (Sabuurradii 8: 4-5).
Muranka weyn ee shaki gelinta Job ee Ilaah sidoo kale waa caan. Ilaah wuxuu tusaa mucjisooyinkiisa, Caddayn u ah amar aan xad lahayn iyo xigmad. Kulankaan wuxuu Ayuubku ku buuxiyaa is-hoosaysiin. Hadalada Ilaah waxaa laga heli karaa kitaabka Ayuub cutubyada 38 illaa 41. Ayuub ayaa qirtay, "waan ogahay, inaad waxkastaba samayn karto, oo wax aadan bilaabin inay kugu adkaato kugu adkaato ... Taasi waa sababta aan si nacasnimo ah uga hadlay waxa aniga iga sarreeya oo aanan fahmin ... Waan maqlay kaliya waxaan maqlayay maqalka, laakiin hada indhahaygu way ku arkeen " (Job 42: 2-3,5). Abuuritaanka kaliya ma aragno inuu jiro Ilaah, waxaan sidoo kale aragnaa dabeecadaha dabeecadiisa oo isaga ka timid. Taas macnaheedu waa in qorshaynta adduunka dhexdeeda ay u baahan tahay qorsheeye, sharci dabiici sharci dejiya, ilaalinta dhammaan uunka oo dhan ilaaliye iyo jiritaanka nolosha jidhka ah oo bixiya nolosha.
Qorshaha Eebbe ee aadanaha
Muxuu Ilaahay ugu talo galay markuu wax walba abuuray oo nolosha ina siiyay? Bawlos wuxuu u sharaxay reer Ateniyiinta: "... wuxuu ka sameeyay bani-aadmiga oo dhan hal qof, inay ku noolaadaan dunida oo dhan, oo wuxuu caddeeyey muddada ay jiri karaan iyo waxa xaddidan ee ay ku noolaan karaan si ay Ilaah u doondoonaan, in kastoo ay dareemi karaan oo ay isaga ka heli karaan, oo isagu runtii isagu sidaas ugama fogaan qof kasta oo inaga mid ah, maxaa yeelay, waan ku nool nahay oo waannu ku dhex hawshoonnaa sidii annaga oo gabayaaga ahu ay kuu yidhaahdeen, annaguna waxaannu nahay farcankiisa. (Falimaha Rasuullada 17: 26-28). Ama si fudud, sida Johannes qorey, inaan "jecelnahay maxaa yeelay isagu wuu hore noo jeclaaday" (1 Yooxanaa 4:19).
Taariikhda ayaa Eebbe u muujiyaa
Dadka falanqeeya waxay weydiinayaan: "Hadduu Eebbe jiro, muxuu isagu naftiisa u muujin waayey dunida?" Iyo "Haddii uu runtii awood badan leeyahay, muxuu u oggolaadaa sharku?" Su’aasha koowaad waxay ina tusinaysaa in Eebbe waligiis isu muujiyey aadanaha. Tan labaadna waxay tahay inuu ka taxadarayo baahida aadanaha ama ugu yaraan uusan waxba ka qaban. Taariikh ahaan iyo Kitaabku wuxuu ka kooban yahay diiwaanno badan oo taariikhi ah, labadaba malaha waa kuwo aan la qaadan karin. Tan iyo wakhtigii qoyskii ugu horreeyay ee aadanuhu, Ilaah badanaa wuxuu xiriir toos ah la lahaa dadka. Kaliya dadku badanaa ma rabaan inay wax ka ogaadaan isaga!
Ishacyaah wuxuu qoray: "Runtii, waxaad tahay Ilaah qarsoon ..." (Ishacyaah 45:15). Ilaah inta badan wuxuu "ku dhuuntaa" markay dadku isaga ku muujiyaan fikradooda iyo ficil ahaan inaysan dooneynin inay wax ku xiriiraan isaga ama jidadkiisa. Ishacyaah markii dambe wuxuu raaciyay: "Bal eeg, gacanta Rabbigu way gaaban tahay, oo isagu ma caawin karo, oo dhegihiisuna ma ay adkaan, si uu wax u maqlo mooyaane, deymahaaguna Ilaah bay ka kala soocayaan, oo dembiyadaadana qariyaan, wejigiisa hortiinnu inaadan maqli doonin " (Ishacyaah 59: 1-2).
Waxay ku bilaabeen Aadan iyo Xaawo. Eebbe wuu abuuray oo wuxuu ku dhajiyay beer ubaxu. Ka dibna si toos ah ayuu ula hadlay iyada. Way ogaadeen inuu halkaas joogo. Wuxuu tusay sida loo helo xiriirka isaga. Isaga ugama dhigin naftiisa Adam iyo Xaawo waxay ahayd inay iyagu doortaan. Waxay ahayd inay go'aan ka gaadhaan bal inay Ilaah caabudaan (tusaale ahaan: ka cun geedka nolosha) ama ha iloobin Ilaah (tusaale ahaan: ka cun geedka aqoonta wanaagga iyo xumaanta). Waxaad dooratay geed qaldan (Bilowgii 1 iyo 2). Si kastaba ha noqotee, inta badan waa la iska indhatirayaa in Aadan iyo Xaawa ay ogaadeen inay caasiyeen Ilaah. Waxay dareemeen dambi. Markuu Abuuraha u yimid inuu la hadlo Malaki ku xigay, waxay maqleen “Ilaahow Sayidku wuxuu ku socday beerta markii maalintii qabow la jiray. Aadan iyo naagtiisii ​​waxay ku dhuunteen geedkii hoostiisa iyagoo Ilaah wajigiisa ah. beerta dhexdeeda " (Bilowgii 1: 3).
Marka yaa qarinayay? Ilaah maahan! Laakiin dadku waa Ilaah hortiisa. Waxay doonayeen masaafo, kala fogeyn isaga iyo isagu. Oo sidaasay weligeed ku sii jirtay. Baybalku waxaa ka buuxa tusaalooyin ku saabsan Ilaahay fidinaya gacanta caawinta aadanaha iyo aadamiga si ay u diidaan gacantaan. Nuux, "wacdiye cadaalad" (2 Butros 2: 5) waxay u badan tahay inuu qarnigii buuxsaday adduunka ka digayay xukunka ciqaabta ee Ilaah. Adduunku ma maqal oo waxaa lagu lumay daadkii. Soddonkii dembiga lahaa iyo Gomora wuxuu Eebbe ku baabi'iyey dabayl, qiiqa oo kor u kacay sida "qiiqa foornada" (Bilowgii 1: 19). Xitaa canaantaan ka sarraysa kama aysan dhigin adduunka horumar. Inta badan Axdigii Hore waxay soo bandhigayaan tallaabada Ilaah ee dadka reer binu Israa'iil ee la doortay. Israa'iilna ma aysan dooneynin inay dhageysato Ilaah midkoodna. "dadku ha u oggolaan in Ilaah nala hadlo," ayay dadku ku qayliyeen (Bilowgii 2: 20).
Ilaah sidoo kale wuxuu soo dhex galay aayaha awoodaha waaweyn sida Masar, Nineveh, Babyion iyo Faaris. Wuxuu had iyo jeer si toos ah ula hadlayaa madaxda ugu sareysa. Laakiin adduunkoo dhan si adag ayuu u adkaystay. Waxaa taas ka sii xun, qaar badan oo ka mid ah addoommadii Ilaahay ayaa si xun u laayay iyaga oo doonaya in ay farriinta Ilaah iyaga u soo diraan. Cibraaniyada 1: 1-2 ugu dambeyntii waxay noo sheegaysaa: "Ka dib markii Ilaah marar badan iyo siyaabo badan awowayaasha kula hadlay nebiyadii, maalmihii ugu dambeeyay wuxuu nagula hadlay wiilka xaggiisa ..." Ciise Masiix wuxuu galay dunida In lagu wacdiyo injiilka badbaadada iyo boqortooyada Ilaah. Natiijada? Wuxuu ku jiray dunida, dunidana waxaa laga sameeyey xaggiisa, laakiin dunidu ma ay aqoonsan isaga. (Yooxanaa 1:10). La kulankiisii ​​adduunka ayaa u keenay geeri.
Ciise, oo ahaa binu-aadamka, ayaa muujiyay jacaylka Ilaah iyo naxariistiisa abuurkiisa: "Yeruusaalemay, Yeruusaalem, tan aad dishay oo aad dhagxisay nebiyada laguu soo diray! baalasheeda; mana aadan rabin! (Matayos 23:37). Maya, Ilaah kaama fogaanayo. Isaga ayaa taariikhdiisa muujiyey. Laakiin dadka badankood ayaa indhaha u xiray isaga.
Baybalku wuxuu ina tusayaa Ilaahay siyaabaha soo socda:
Bayaanada Ilaah ee ku saabsan dabeecadiisa
Markaa Baxniintii 2:3 wuxuu u muujiyey Muuse magiciisa: "Waxaan noqonayaa ciddaan noqon doono." Muusena wuxuu arkay geed guban oo aan dabka guban. Magacan, wuxuu cadeynayaa inuu yahay is-nafis iyo is-noolaansho. Dhinacyada kale ee dabeecadiisa waxaa lagu muujiyay magacyadiisa kale ee Baybalka. Ilaah wuxuu reer binu Israa'iil ku amray: "Haddaba sidaas daraaddeed waa inaad quduus ahaataan, maxaa yeelay, anigu quduus baan ahay" (Bilowgii 3: 11). Ilaah waa qoduus. Ishacyaah 55: 8, Ilaah wuxuu si cad noogu sheegayaa: "... Fikirradaydu fikirradiinna ma aha, oo jidadkiinna ma aha jidadkayga." Ciise Masiix wuxuu ahaa Ilaah qaab aadanaha. Isaga wuxuu isku sharaxay inuu yahay "iftiinka dunida" (Yooxanaa 8:12), aniga oo ah “Anigu waxaan ahay” oo ku hor yiil Ibraahim (Aayadda 58) sida "albaabka" (Yooxanaa 10: 9) sidii "Adhijirka wanaagsan" (Aayadda 11) iyo sida "jidka iyo runta iyo nolosha" (Yooxanaa 14:6).
Is-sheegitaanka Ilaah ee ku saabsan hawshiisa
Qaadashadu waa qeyb ka mid noqoshada, ama waxay ka soo baxeysaa. Bayaanka ku saabsan samaynta sidaas awgeed dhammaystiridda weedhaha ku saabsan nuxurka. Waxaan sameeyaa "Iftiinka ... oo waxaan abuurka gudcurka", ayuu Ilaah ku yidhi naftiisa Isxaaq 45: 7; Waxaan siinayaa "nabad ... oo waxaan sameeyaa belaayo, waayo, aniga ayaa Rabbiga ah oo waxan oo dhan sameeya." Eebbe wax kasta wuu abuuray. Oo isagaa xukuma abuurka. Ilaah sidoo kale wuxuu sii saadaaliyay mustaqbalka: "Anigu waxaan ahay Ilaah, oo ma jiro mid kale, oo ah Ilaaha wax aan la mid ahayn. Waxaan tan iyo bilowgii shaaca ka qaaday wixii dhici doona iyo goorta aan weli dhicin. go'aansaday, dhacayaa, iyo waxkasta oo aan damcay inaan sameeyo, " (Ishacyaah 46: 9-10). Ilaah dunidu wuu jecel yahay adduunka wuxuuna u soo diray wiilkiisa si uu u keeno badbaadadeeda. "Ilaah intuu dunida jeclaaday wuxuu siiyay wiilkiisa keliya oo dhashay in kuwa isaga rumaystaa aysan lumin laakiinse ay lahaadaan nolosha weligeed ah" (Yooxanaa 3:16). Isaga oo Ciise ku maraya, Ilaah wuxuu carruurta ku keenaa qoyskiisa. Muujintii 21: 7 waxaan akhrinaa: "Kii guuleystaa wuxuu dhaxli doonaa wax walba, oo anna waxaan u ahaan doonaa Ilaah, isna wuxuu ahaan doonaa wiilkayga". Mustaqbalka Ciise wuxuu yiri: "Bal eeg, dhaqso ayaan u iman doonaa, abaalgudkaygiina waan wataa si aan qof walba u siiyo waxa shuqulladiisu yihiin" (Muujintii 22:12).
Bayaanka dadku ka sheegaan dabeecadda Eebbe
Ilaah had iyo goor wuxuu la xidhiidhaa dadka uu isagu doortay inay fuliyaan doonistiisa. Kuwo badan oo addoommadan ka mid ah ayaa faahfaahin ka siiyay dabeecadda Eebbe ee ku jira Kitaabka Quduuska ah. Muuse wuxuu yidhi, Rabbigu waa Ilaahayaga, oo waa Sayid keliya oo keligiis ah (Bilowgii 5: 6). Waxaa jira ilaah kaliya. Baybalku wuxuu metelaa kelinimo. (Faahfaahin dheraad ah, arag cutubka saddexaad). Bayaannada badan ee qoraaga ku saabsan Ilaah halkan waxaa ku jira oo keliya: "Waayo, waa kee Ilaah haddii aanu ahayn Rabbiga, ama dhagax weyn haddii uusan ahayn Ilaaheenna?" (Sabuurradii 18:32). Kaliya Eebbe wuxuu mudan yahay cibaadada wuuna xoojiyaa kuwa caabuda. Waxaa jira faamil aad u badan oo ku saabsan dabeecadda Eebbe ee ku jirta Sabuurrada. Mid ka mid ah aayadaha ugu raaxada badan Qorniinka waa 1 Yooxanaa 4:16: "Ilaah waa jacayl ..." Faham muhiim ah oo ku saabsan jacaylka Ilaah iyo doonistiisa sare ee aadanaha waxaa laga heli karaa 2 Butros 3: 9: "Sayidka. .. ma doonayo in qofna lumo, laakiin qof walba wuxuu doonayaa inuu toobad keeno. " Waa maxay rabitaanka ugu weyn ee Eebbe noo jecel yahay, abuurkiisa, carruurtiisa? Taasi waa la badbaadiyey. Oo Erayga Eebbe dib ugama soo noqon doono isaga oo madhan, wuxuu dhammayn doonaa wixii la doonayay (Ishacyaah 55:11). Ogaanshaha in ujeedka ilaahay ee adag yahay inuu ina badbaadiyo iyo inuu awooda inuu sidaas sameeyo waxay na siisaa rajo weyn.
Kitaabka Quduuska ah waxaa ku jira bayaanno ka yimid dadka waxa ku saabsan ficillada Ilaah
Ilaah “dhulka waxba kama deldelayo,” ayuu yidhi Job 26: 7. Waxay jiheysaa xoogagga go'aamiya meeraha iyo wareegga dhulka. Oo gacantiisa waxaa ku jira nolol iyo geeri noloshiisa kuwa nool, Haddaad wejigaaga qarisaa way cabsan doonaan, Oo haddaad neeftaada ka qaaddo way gudbi doonaan, oo ciid bay noqon doonaan. Qaabka dhulka " (Sabuurradii 104: 29-30). Si kastaba ha noqotee, Ilaaha Qaadirka ah, oo ah abuur jecel, ayaa dadka ku abuuray muuqaalkiisa, oo wuxuu siiyey xukunka dhulka. (Bilowgii 1: 1). Markuu arkay in xumaanta ay ku fidday dhulka, “wuxuu ka qoomamooday inuu dadka ku abuuray dhulka oo qalbigiisa buu ku dhibay” (Bilowgii 1: 6). Wuxuu kaga jawaab celiyay xumaanta dunida isagoo diray daad daadkii baabi'iyay aadanaha oo dhan marka laga reebo Nuux iyo qoyskiisa (Bilowgii 1: 7). Markii dambe Ilaah wuxuu u yeedhay nabi Ibraahim oo wuxuu axdi la galay inuu u duceeyo "wax kasta oo dhulka jooga" (Bilowgii 1: 12-1) tixraac loogu talagalay Ciise Masiix, farcankii Ibraahim. Markuu aasaasay reer binu Israa'iil, Ilaah si yaab leh ayuu ugu hoggaamiyey Badda Cas dhexdeeda, wuuna baabbi'iyey ciidammada Masar: "... fardo iyo fardo ayuu badda ku dhex tuuray" (Bilowgii 2: 15). Oo reer binu Israa'iil waxay jebiyeen axdigii Ilaah la dhigtay, oo waxay burburiyeen dulmiga iyo xaqdarrada. Sidaa darteed, Ilaah wuxuu u oggolaaday ummaddu inay weerarto dad shisheeye oo aakhirkii ka kaxeeyo dhulkii loo ballanqaaday addoonsiga (Hesekiel 22:23-31; 36:15-21). Laakiin Ilaaha naxariista leh wuxuu ballanqaaday inuu u soo diro badbaadiye dunida si ay axdi daa'im ah oo weligeed ah ula yeeshaan dhammaan kuwa ka toobad keena dembiyadooda, reer binu Israa'iil iyo kuwa aan reer binu Israa'iil ahaynba. (Ishacyaah 59: 20-21). Ugu dambayntiina Ilaah runtii wuxuu soo diray Wiilkiisa Ciise Masiix. Ciise wuxuu sharraxay: "Maxaa yeelay, waa doonistii aabbahay in ku alla kii arka wiilka oo rumaystaa uu lahaado nolosha weligeed ah, oo maalinta u dambaysa waan soo sara kicin doonaa" (Yooxanaa 6:40). Ilaah wuxuu ballan qaaday: "... ku alla kii magaca Rabbiga ku baryaa, waa badbaadi doonaa" (Rooma 10:13).
Maanta Ilaah wuxuu awood siinayaa Kaniisadiisa inay ku wacdiyaan injiilka Boqortooyada "Markhaati u ah dadyowga adduunka oo dhan." (Matayos 24:14). Maalintii Bentakostiga iyo sarakiciddii Ciise Masiix ka dib, Ilaah wuxuu u soo diray Ruuxa Quduuska si uu u mideeyo Kaniisadda: jidhka Masiixa iyo u muujinta waxyaalaha qarsoon ee Ilaah Masiixiyiinta (Falimaha Rasuullada 2: 1-4).
Baybalku waa buug ka hadlaya Ilaah iyo xidhiidhka aadanaha ee isaga la leh. Farriintaadu waxay nagu martiqaadaysaa baarista cimri dheer si aan wax uga baranno wax badan oo ku saabsan Ilaah, waxa uu yahay, waxa uu sameeyo, waxa uu doonayo, waxa uu qorsheysto. Laakiin qofna ma fahmi karo muuqaalka buuxa ee xaqiiqada Eebbe.
In yar ayaa ka niyad jabtay awoodiisa inuu garto buuxinta Ilaah, Yooxanaa wuxuu ku soo gabagabeeyey akoonkiisii ​​nolosha Ciise ereyadeed: "Waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo Ciise sameeyey. Laakiin haddii mid mid loo qoro kan kale, Marka waxaan u malaynayaa inaan dunidu fahmi doonin buugaagta ay tahay in la qoro " (Yooxanaa 21:25).
Marka la soo koobo, Baybalku wuxuu muujinayaa Ilaah sida
• Aan ku xirnayn waqti xaddidan
Not kuma xidhna xudduud kasta oo xaddidan
• awood badan
• wax garadka ah
• transcend (dul istaag adduunka)
• aan joogto ahayn (ka khusayso caalamka).
Laakiin waa maxay Ilaaha saxda ah?
Borofisar diimeed ayaa mar isku dayay inuu dhagaystayaashiisa siiyo fikrad sax ah oo Eebbe ah. Wuxuu ka codsaday ardayda inay gacmaha is gacan qaadaan goobaabin ballaaran oo indhahooda xirtaan. "Hadda isdeji oo iska qiyaaso Ilaah," ayuu yidhi. "Iskuday inaad qiyaasto siduu u eg yahay, wuxuu carshigiisu u eg yahay, codkiisu u ekaan karo, waxa ku wareegsan." Iyagoo indhahoodu xidhanyihiin, gacanta gacanta ku hayaan, ardaydu waxay ku fadhiisteen kuraastooda muddo dheer iyagoo ku riyoonayay sawirrada Ilaah. "Waa hagaag?" ayuu waydiiyay borofisarka. "Miyaad aragtaa isaga? Midkiin walbana waa inuu maskaxda ku hayaa sawir. Laakiin, ayuu yidhi borofisarku:" Taasi ma aha Ilaah! " "Maya!" Wuxuu ka takhalusay fikirradeedii. "Taasi ma aha Ilaah! Si buuxda uma aad garan kartid maskaxdeenna! Ma jiro qof si buuxda u fahmi kara Ilaah, maxaa yeelay Ilaah waa Ilaah, innaguna waxaynu nahay uun jaango'an jir iyo xaddidan." Faham aad u qoto dheer.
Maxay u adag tahay in la qeexo cidda iyo waxa Ilaah yahay? Caqabadda ugu weyn waxay ku jirtaa xaddidaadda uu soo sheegay borofisarkaas: Dhammaan waaya aragnimadiisa waxaa lagu sameeyay shanta dareen, iyo fahamkeenna luqadeed oo dhan ayaa tan ku saleysan. Taas bedelkeeda, Ilaahay waa daa'in. Waa xad dhaaf. Waa mid aan la arki karin. Laakiin waxaan sameyn karnaa bayaanno macno leh oo ku saabsan ilaah, in kasta oo aan ku xadidannahay dareenkeenna jidheed.
Xaqiiqda ruuxiga ah, luqadda aadanaha
Ilaah wuxuu isu muujiyaa si aan toos ahayn abuurista. Wuxuu fara geliyey taariikhda adduunka marar badan. Ereygiisa, Kitaabka Quduuska ah, wax badan ayuu inooga sheegayaa isaga. Waxay sidoo kale u muuqatay qaababka qaarkood ee Kitaabka Quduuska ah dadka qaar. Si kastaba ha noqotee, Ilaah waa ruux, buuxnaantiisa lama arki karo, lama dareemo, waa la uriyey. Baybalku wuxuu ina siinayaa xaqiiqooyin ku saabsan fikradda Ilaah iyadoo la adeegsanayo ereyo ay noolaha jidhku ku fahmi karaan adduunkooda jireed Laakiin ereyadan ma awoodaan inay si buuxda u muujiyaan Ilaah.
Tusaale ahaan, Baybalku wuxuu Ilaah ugu yeeraa "dhagax weyn" iyo "qalcad" (Sabuurradii 18: 3) "gaashaanka" (Sabuurradii 144: 2), "dab wax gubaya" (Cibraaniyada 12:29). Waxaan ognahay inuusan Eebbe macno ahaan ula xiriirin waxyaabahaan jirka ah. Kuwani waa astaamo kuwaas oo, ku saleysan waxa binu aadam ahaan loo arki karo oo la fahmi karo, inoo keenaya dhinacyada muhiimka ah ee Ilaah.
Baybalku xitaa wuxuu Eebbe u saleeyaa qaab aadanaha oo muujinaya muuqaalkiisa iyo xiriirkiisa aadanaha. Meelaha lagu sharraxay Ilaah jir (Filiboy 3:21); madaxa iyo timaha (Muujintii 1:14); waji (Bilowgii 1:32; Baxniintii 31:2; Muujintii 33:23); Indhaha iyo dhegaha (Sharciga Kunoqoshadiisa 5:11; Sabuurradii 12:34; Muujintii 16:1); Sanka (Bilowgii 1:8; Baxniintii 21: 2); Afka (Matayos 4: 4; Muujintii 1:16); Bushimaha (Job 11: 5); Codka (Sabuurradii 68:34; Muujintii 1:15); Carrab iyo neef (Ishacyaah 30: 27-28); Hubka, gacmaha iyo faraha (Sabuurradii 44: 3-4; 89:14; Cibraaniyada 1: 3; Baxniintii 2:18; Baxniintii 18:2; Sharciga Kunoqoshadiisa 31:18; Sabuurradii 5: 9; Muujintii 10:8); Garbaha (Ishacyaah 9: 5); Naas (Muujintii 1:13); Soo noqo (Baxniintii 2:33); Hips (Yexesqeel 1:27); Lugaha (Sabuurradii 18:10; Muujintii 1:15).
Had iyo jeer markaan kahadalno xiriirka aan la leenahay Eebbe, Baybalku wuxuu adeegsadaa luqad laga soo qaatay nolosha qoyska aadanaha. Ciise wuxuu ina baray inaan u duceyno: "Aabahayaga jannada ku jira!" (Matayos 6:9). Ilaah wuxuu doonayaa inuu dadkiisa qalbi qaboojiyo sida hooyadeed u qalbi qaboojiya carruurteeda (Ishacyaah 66:13). Ciise xishoon maayo inuu ugu yeero kuwa Ilaah doortay walaalihiis (Cibraaniyada 2:11); Isaga waa curadkeeda, oo waa curadkeeda (Rooma 8:29). Muujintii 21: 7 Eebbe wuxuu ballan qaadayaa: "Kii guulaysta wax buu dhaxlayaa, oo anna waxaan isaga u ahaan doonaa Ilaah, isna wuxuu ii ahaan doonaa wiilkayga." Haa, Ilaah wuxuu Masiixiyiinta ugu yeerayaa inay xiriir qoys la yeeshaan carruurtiisa. Baybalku wuxuu ku sifeynayaa bondkan fahamka aadanaha. Waxay sawiraysaa sawir dhab ah oo xagga ruuxa ah oo ugu sareeya oo lagu magacaabi karo muuqaal. Tani nama siineyso mustaqbal buuxa, sharaf, run dhab ah. Farxadda iyo ammaanta xiriirka ugu dambeeya ee Ilaah la leh carruurtiisu aad ayey uga weyn yihiin ereyada xaddidan ee ereyadayadu sheegi karaan. 1 Yooxanaa 3: 2 wuxuu noo sheegayaa: "Gacaliyeyaal, annagu haddaan nahay carruurta Ilaah; laakiin waxa aan ahaan doonno weli lama muujin. Laakiin waxaan ognahay haddii ay muuqato inaynu noqon doonno sidiisa oo kale, maxaa yeelay innaguba waxaannu arki doonaa isaga siduu yahay. Sarakicidda sarakicidda, markii buuxnaanta badbaadada iyo boqortooyada Ilaah timaado, ugu dambayntii waxaan Ilaahay ku baran doonaa "gebi ahaanba". Paul ayaa qoray, "Hadda waxaan ku aragnaa muraayad mugdi ah muraayad, laakiin markaas waji ka waji. Hadda waxaan u gartay gabal; laakiin markaas waan gartaa sidii laygu aqoonsaday" (1 Korintos 13:12).
"Kii i arka, wuxuu arkaa aabbaha"
Sidaan soo aragnay, muujinta Eebbe waa abuurista, taariikhda, iyo aayadda. Intaas waxaa sii dheer, Ilaah ayaa sidoo kale isu muujiyey nin isagoo nin noqday. Wuxuu noqday sidii annaga oo kale oo noolaaday, adeegay oo wax ku baray dhexdeenna. Imaatinka Ciise wuxuu ahaa ficilkii ugu weynaa ee Eebbe muujinta. Ereyguna jidh buu noqday (Yooxanaa 1:14). Ciise wuxuu ka tanaasulay muddooyinka rabbaaniga ah wuxuuna noqday aadam. Wuxuu u dhintay dembiyadeenna, kuwii dhintayna waa la sara kiciyey, oo wuxuu aasaasay kaniisaddiisa. Imaatinka Masiixu wuxuu argagax ku yeeshay dadka wakhtigiisa. Sabab? Sababtoo ah muuqaalkooda ilaahnimadooda kuma filna, sida aan ku arki doono labada cutub ee soo socda. Si kastaba ha noqotee, Ciise wuxuu xertiisii ​​ku yidhi: Ku alla kii i arka, wuxuu arkaa Aabbaha! (Yooxanaa 14:9). Marka la soo koobo: Ilaah wuxuu isku muujiyay Ciise Masiix.
3. Ilaah kale ilama jiro
Yuhuuda, Masiixiyada, Islaamka. Dhamaan seddexda diimood ee dunidu waxay ku tiirsan yihiin Ibraahim aabihiis. Ibraahim wuxuu ku kala duwanaa noloshiisa hal hab oo muhiim ah: Wuxuu caabudi jiray hal Ilaah oo keliya - Ilaaha runta ah. Monotheism-ka waa aaminsanaanta inuu jiro hal ilaahey oo tilmaamaya halka ay ka bilaawday diinta dhabta ah.
Ibraahim wuxuu caabuday Ilaaha runta ah Ibraahim kuma uusan dhalan dhaqan cibaado leh. Boqollaal sano ka dib, Ilaah wuxuu uga digay reer binu Israa'iil qadiimka ah: "Awowayaashiin waxay hor degganaayeen Webiga Quduuska ah, Terax, Ibraahim iyo Naaxoor aabahood, oo waxaan u adeegi jiray ilaahyo kale. Markaasaan awowgiin Ibraahim ka soo kexeeyey Webiga oo waxaan ku sii daayay inuu dhex wareego dalka Kancaan oo dhan iyo in ka sii badan Jinsi ... " (Yashuuca 24: 2-3).
Kahor inta uusan u yeedhin Ilaah, Ibraahim wuxuu degay Uur; awowayaashiisna malaha waxay degeen Haaraan. Ilaahyo badan baa lagu caabudi jiray labada meeloodba. Tusaale ahaan Ur, tusaale ahaan, waxaa jiray ziggurat weyn, oo loo hibeeyay ilaaha bisha Sumerian Nanna. Macbudyo kale oo ku yaal Uur waxay u adeegeen curadyadii An, Enlil, Enki iyo NingaL, Eebbe wuxuu ka dhammaaday adduunyadan caabudaadda leh ee caqiidada: "Ka tag waddankaagii hooyo iyo ehelkaaga iyo gurigii aabbahaa oo u kac waddan aan doonayo inaan ku tuso. wuxuu doonayaa inuu kaa dhigo dad aad u wanaagsan ... " (Bilowgii 1: 12-1).
Ibraahimna Ilaah buu addeeci jiray wuuna tegey (Aayadda 4). Dareen ahaan, xiriirka Ilaah ee reer binu Israa'iil wuxuu ka bilaabmay markan: markuu isu muujiyey Ibraahim. Ilaah wuxuu axdi la dhigtay Ibraahim. Ka dib wuxuu cusboonaysiiyay axdigii uu la galay wiilkii Isxaaq iyo Isxaaq wiilkiisii ​​Yacquub. Ibraahim, Isxaaq iyo Yacquub waxay caabudeen hal Ilaah oo run ah. Tani waxay sidoo kale ku kala duwday ehelkooda. Tusaale ahaan, Laabaan, oo ahaa wiilkii Naaxoor, oo ahaa Ibraahim walaalkiis, ayaa weli yaqaan ilaahyada guryaha (Idol) (Bilowgii 1: 31-30).
Ilaah wuxuu reer binu Israa'iil ka badbaadiyey sanam caabudkii Masar
Tobaneeyo sano kadib, Jakob (Waxaa loogu magac daray Israail) carruurtiisii ​​Masar. Reer binu Israa'iil waxay sii joogi jireen Masar qarniyo badan. Waxa kale oo jirtay in lagu guursaday Masar dhexdeeda. Encyclopedia Kitaabka Quduuska ah (Eltville 1990) wuxuu qoraa: "Diinta [Masar] waa isu-soocelinta shakhsiyaadka diimaha nomos, kuwaas oo ilaahyo fara badan laga keenay dibada. (Bacal, Astarte, the grotesque den) tallaabo aan laga fiirsan oo ka soo horjeedda fikradaha kala duwan ee ka soo baxay ... Dhulka, ilaahyada waxaa lagu daray xayawaan lagu garto calaamadaha qaarkood " (Pp 17-18).
Oo reer binu Israa'iilna aad bay ugu bateen Masar, laakiin waxay ku dhinteen addoonsigii Masriyiinta. Ilaah wuxuu isku muujiyey ficillo taxane ah oo horseeday in Israa'iil laga xoreeyo Masar. Markaasuu axdi la dhigtay quruuntii reer binu Israa'iil. Waxyiga Ilaah ee dadka u muujiya dadka wuxuu had iyo jeer ahaa dad cibaado leh, sida dhacdooyinkaani muujinayaan. Wuxuu isu muujiyey Muuse inuu yahay Ilaaha Ibraahim, Isxaaq, iyo Yacquub. Magaca uu isagu isu bixiyo ("Waxaan noqon doonaa" ama "Waxaan ahay", Baxniintii 2:3), waxay muujineysaa in ilaahyo kale aysan jirin sida uu jiro. Eebbe waa. Ma tihid!
Maadaama Fircoon uusan dooneynin inuu sii daayo reer binu Israa'iil, Ilaah wuxuu Masar ku laayay toban belaayo. Qaar badan oo belaayadan ah waxay markiiba muujinayaan itaal darrida iyo ilaahyada Masar. Tusaale ahaan, mid ka mid ah ilaahyada Masaarida waxay leeyihiin madaxa ubaxa. Daacuunka Ilaah ee rahyada ayaa ka dhigaya cibaadada ilaaha inuu yahay wax lagu qoslo.
Xitaa ka dib markuu arkay cawaaqib xumada tobankii belaayo, Fircoon wuu diiday inuu sii daayo reer binu Israa'iil. Markaa Ilaahay baa ciidanka Masar ku baabi'inaya badda dhexdeeda (Bilowgii 2: 14). Falkani wuxuu muujinayaa itaal darrida ilaaha badda Masar. Heesta heesaha guusha (Baxniintii 2: 15-1), reer binu Israa'iil waxay ammaaneen Ilaahooda Qaadirka ah.
Ilaaha runta ah ayaa la helay oo la lumiyaa mar labaad
Ilaah wuxuu Masar ka soo kaxeeyey reer binu Israa'iil Siinay, meeshii ay axdi ku dhigteen. Tobanka amar ee ugu horreeya, Eebbe wuxuu ku nuuxnuuxsaday in cibaadada kaligeed la iska leeyahay: "Waa inaanad lahaanina ilaahyo kale aniga mooyaane" (Bilowgii 2: 20). Qaybta labaad wuxuu ka reebayaa sanam caabudidda (Aayadaha 4-5). Mar labaad iyo mar kale Muuse wuxuu kula dardaarmay reer binu Israa'iil inayna ku xadgudbin sanam caabudidda (5. Mose 4:23-26; 7:5; 12:2-3; 29:15-20). Wuxuu ogyahay in reer binu Israa'iil lagu dhibi doono inay raacaan ilaahyada reer Kancaan markay yimaadaan dhulkii loo ballanqaaday.
Magaca salaada Sh (Cibraaniga "maqla!" Ka dib ereyga ugu horreeya ee salaadda) waxay muujineysaa sida ay Israa'iil uga go'antahay Ilaah. Waxay ku bilaabmaysaa sidan: "Reer binu Israa'iilow, maqla, Rabbigu waa Ilaahayaga, Oo keligiisna waa Rabbiga, oo waa inaad Rabbiga Ilaahaaga ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo xooggaaga oo dhan" (Bilowgii 5: 6-4). Si kastaba ha noqotee, Israa'iil waxay si isdaba joog ah ugu dhacdaa ilaahyada reer Kancaan, oo ay ku jiraan EI (magac caan ah oo sidoo kale lagu dabaqi karo Ilaaha runta ah), Bacal, Dagon iyo Asthore (magac kale oo ah ilaaha Astarte ama Ischtar). Dhaqanka Bacal gaar ahaan wuxuu rafcaan ka qaadan karaa reer binu Israa'iil. Markay gumeystaan ​​dalka reer Kancaan, waxay ku tiirsan yihiin goosashada wanaagsan. Bacal, waa ilaaha duufaanka, waxaana lagu caabudi jiray ciidaha bacrinta.
The International Standard Bible Encyclopedia: "Sababtoo ah wuxuu diiradda saarayaa bacrinta dhul iyo xoolo, dhaqamada bacriminta waa inay had iyo jeer soo jiitaan bulshooyinka sida Israa'il Old, oo dhaqaalihiisu inta badan ahaa mid aan wanaagsaneyn" (Cabbirka 4aad, bogga 101).
Nebiyadii Ilaahay waxay ku booriyeen reer binu Israa'iil inay ka soo noqdaan riddadoodii. Markaasaa Eliiyaah wuxuu dadkii weyddiiyey: War ilaa goormaad sii garaacaysaa labada dhinac? Oo haddii Rabbiga Ilaah ahu uu isaga xaggiisa dambe yahay, Hadday Bacal raacayso isaga raac, (1 Boqorada 18:21). Ilaah wuxuu uga jawaabayaa Eliyaas baryadii uu ku caddeeyey inuu yahay Ilaahay keligiis. Dadku waxay aqoonsadeen: "Rabbigu waa Ilaah, Rabbigu waa Ilaah!" (Aayadda 39).
Ilaah kaliya iskama tusin inuu isagu yahay kan ugu wada sarreeya ilaahyada oo dhan, laakiin waa sida keliya ee Eebbe: "Anigu waxaan ahay Rabbiga, oo mid kale ma jiro, Ilaah kale ma jiro." (Ishacyaah 45:5). Iyo: "Ilaah hortayda lama samayn, sidaa darteed ma jiro mid iga daba socda. Aniga, aniga ayaa ah Rabbiga, oo aniga mooyaane Badbaadiye mooyee (Ishacyaah 43: 10-11).
Yuhuuda - adkaysiga keli-talisnimada
Diinta Yuhuuddu wakhtigii ciise ciise ma ahayn mid fahansan (Adoo u malaynaya ilaahyo badan, laakiin rumaynta mid ka ugu weyn) weli hal-abuur (u oggolaanaya kaliya cibaadada ilaah, laakiin tixgelinta kuwa kale inay jiraan), laakiin si adag ula dhaqan (rumaynta inuu jiro hal Ilaah keliya). Sida laga soo xigtay Qaamuuska fiqiiga ah ee Axdiga Cusub, Yuhuuddu waxay ku midoobeen meel kale oo aan ahayn caqiidadooda ah hal Ilaah (Cabbirka 3aad, bogga 98).
Hadalka Sh'ma wuxuu ahaa qayb muhiim ka ah diinta Yuhuudda ilaa maantadan la joogo. Rabbi Akiba (Wuxuu u dhintey shahiid qarnigii 2aad AD), kaas oo la sheegay in la diley inta lagu gudajiray salaada shisha, waxaa la sheegay in lagu soo celin doono dhibaatadiisa 'Sharciga Kunoqoshadiisa 5: 6 iyo neefta ugu dambeysa ereyga "kali" qabtay.
Ciise on keligii talisnimada
Markuu qareen weydiiyay Ciise muxuu yahay amarkii ugu weynaa, Ciise wuxuu ku jawaabey xigasho Sh Shma: "Reer binu Israa'iilow, Rabbiga Ilaaheenna ah waa Rabbi keliya, oo waa inaad Rabbiga Ilaahaaga ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan. Qalbiyad, iyo naftaada oo dhan, caqligaaga oo dhan iyo xooggaaga oo dhan " (Markos 12: 29-30). Karraaniga ayaa ku raacsan: "Macallimow, runtii si sax ah ayaad u hadashay! Isagu waa mid keliya oo aan isaga ahayn mooyee ..." (Aayadda 32).
Cutubka xiga waxaan arki doonnaa imaatinka Ciise oo qoto dheer oo fidinaya muuqaalka Ilaah ee kaniisadda Axdiga Cusub. Ciise wuxuu sheeganayaa inuu yahay Wiilka Ilaah isla mar ahaantaana Aabbaha la mid yahay. Ciise wuxuu xaqiijinayaa cibaadada. Qaamuuska fiqi ahaaneed ee Axdiga Cusub wuxuu ku nuuxnuuxsanayaa: "Christology-gu wuxuu xoojinayaa caalimnimada Masiixiyiintii hore, ma ruxmayo ... Marka loo eego Injiillada, Ciise xitaa wuxuu kordhiyaa caqiiddada monotheistic" (Cabbirka 3aad, bogga 102).
Xitaa cadaawayaasha Masiixu waxay isaga ku marag furayaan: "Macallimow, waan og nahay inaad run tahay oo aadan ninna waxba weyddiisanaynin, maxaa yeelay, ma ixtiraamaysid sumcadda dadka, laakiin waxaad ku bartaa Jidka Eebbe toos ah" (Aayadda 14). Sida Qorniinku muujinayo, Ciise waa "Masiixa Ilaah" (Luukos 9:20), "Masiixa Ilaah la doortay" (Luukos 23:35). Isagu waa "Wanka Ilaah" (Yooxanaa 1:29) iyo "kibista Eebbe" (Yooxanaa 6:33). Ciise, Ereyga, wuxuu ahaa Ilaah (Yooxanaa 1:1). Waxaa laga yaabaa in weedha cad ee ugu caansan Ciise laga heli karo Mark 10: 17-18. Markii qof kula hadlo isaga “sayid wanaagsan”, Ciise wuxuu ugu jawaabayaa: “Maxaad iigu yeedhaysaa wanaagsan? Ma jiro qof wanaagsan oo Eebbe keligiis ah.”
Waxa kaniisaddii hore wacdiyey
Ciise wuxuu kaniisadiisa siiyay howsha wacdinta injiilka oo dadkoo dhan xer ka dhiga (Matayos 28: 18-20). Sidaa darteed, waxay si dhakhso leh wacdi ugu dirtay dadka qaabeeya dhaqanka cibaadada. Markay Bawlos iyo Barnabas ku wacdiyeen oo ka dhex shaqeeyeen mucjisooyin Lystra, falcelinta dadka deggan waxay khiyaameeyeen fikirkooda cibaadada: “Laakiin markay dadkii arkeen wixii Bawlos sameeyey, codkoodii bay kor u qaadeen oo qaylo-dhaan ahaan bay ugu qaylinayeen: ilaahyadu waxay noqdeen rag u siman ragga iyo noo kaalaya, oo waxay u bixiyeen Barnabayoos Sabuur iyo Bawlos Hermes ... " (Falimaha Rasuullada 14: 11-12). Hermes iyo Zeus waxay ahaayeen labo ilaah oo ka yimid pantheon Griiga. Labada kaniisadood ee Griiga iyo Roomaanka labadaba si wanaagsan ayaa looga yaqaanay Axdiga Cusubi, iyo sanamadii caabudi jirtay sanamyadii Greco-Roman. Bawlos iyo Barnabas waxaay si xamaasad leh ugu jawaabeen: "Waxaan nahay dad dhimanaya oo kale oo kale oo annaguna waxaan idinku wacdinnaa injiilka inaad ka noqotaan ilaahyadan beenta ah oo ah Ilaaha nool, samada iyo dhulka iyo badda iyo waxa ku jira oo dhan, leeyahay " (Aayadda 15). Xitaa sidaas oo ay tahay, way adkaan kari waayeen dadka inay allabari u bixiyaan.
Athens Bawlos wuxuu helay meelo allabari oo ilaahyo badan oo kaladuwan - xitaa meeshii allabari oo la hibeeyey "Si ilaah aan la garaneyn" (Falimaha Rasuullada 17:23). Meeshaas wuxuu u qaatay sidii “hangar” oo wacdintiisii ​​kali talisnimada ahayd ee uu u jeediyey reer Athens. Efesos dhexdeeda, dhaqankii Artemis (Diana) waxaa wehelinayay ganacsi firfircoon oo ku saabsan sanamyada ilaahyada. Markuu Bawlos wacdiyey Ilaaha keliya ee runta ah, ayaa ganacsigani yaraaday. Demetrius dahabiga ahaa, oo khasaaro ay ka soo gaadhay natiijada, ayaa ka cabanaysa “Bawlosani xoog badan buu ku bixiyaa, wuu dhaadhiciyaa oo la hadlayaa: Waxa gacmaha lagu sameeyo ma aha ilaah” (Falimaha Rasuullada 19:26). Mar labaad, midiidinka Ilaah ayaa wax ku wacdiyaya nambarka sanamyada dadku sameeyay. Sida kii hore, Axdiga Cusubi wuxuu sheegaa hal Ilaah oo run ah. Ilaahyada kale maahan.
Ilaah kale ma jiro
Si xariif ah oo waadix ah, Bawlos wuxuu u sheegayaa Masiixiyiinta Masiixiyiinta ah ee Korintos inuu ogyahay "inuusan sanam dunida ka jirin oo uusan Ilaah jirin mid kale" (1 Korintos 8:4).
Monotheism-ka ayaa u go'aaminaya kii hore sidii axdiga cusub. Ibraahim, oo ah aabaha aaminka ah, wuxuu Eebbe ugaga yeedhay mujtamaca caabudaadda badan. Ilaah wuxuu isu muujiyey Muuse iyo reer binu Israa'iil wuxuuna aasaasay axdigii hore axdigii cibaadadiisa keli ahaanta u soo diray isagoo nebiyo soo diray si ay u xoojiyaan farriinta caabudaadda. Ugu dambayntiina, Ciise laftiisu wuxuu xaqiijiyey monotheism. Kaniisadda Axdiga Cusubi ee uu aasaasay wuxuu si joogto ah ula dagaallamayey caqiidooyinka aan matalin keli-talisnimada. Tan iyo maalmihii Axdiga Cusub, Kaniisaddu waxay si joogto ah u wacdiyi jirtay wixii Ilaah shaaca ka qaaday waqti dheer ka hor: mid keliya ayaa ah Ilaah, "Rabbi keligiis".
4. Eebbe, oo lagu muujiyey Ciise Masiix
Baybalku wuxuu baray: “Waxaa jira Ilaah keliya”. Ma aha laba, saddex ama kun. Waxaa jira Ilaah oo keliya. Masiixiyaddu waa diin caamil ah, sidaan ku aragnay cutubka saddexaad. Taasi waa sababta imaatinka Masiixu u horseeday dareen noocaas ah wakhtigaas.
"Rabitaan ku ah Yuhuudda ..."
Ciise Masiix, xagga muujinta “ammaanta ammaantiisa iyo sumcadda jiritaankiisa”, Ilaah naftiisa ayuu isugu muujiyey dadka (Cibraaniyada 1:3). Ciise wuxuu ugu yeedhay Ilaah aabihiis (Matayos 10: 32-33; Luukos 23:34; Yooxanaa 10:15) oo wuxuu yidhi, Kii i arkaana, wuxuu arki doonaa Aabbaha. (Yooxanaa 14:9). Wuxuu ku dhawaaqay sheegashada geesinimada leh: "Aniga iyo aabaha mid baan" (Yooxanaa 10:30). Sarakiciddiisa ka dib, Toomas ayaa la hadlay isaga oo leh, “Eebahay iyo Ilaahay! (Yooxanaa 20:28). Ciise Masiix wuxuu ahaa Ilaah.
Yahuudda ma aqbalin tan. "Rabbigu waa Ilaaheenna, Sayidku waa keligiis" (Sharciga Kunoqoshadiisa 5: 6); xukunkan ka yimid Shida ayaa muddo dheer aasaas u ahaa caqiidada Yuhuudda. Laakiin halkan waxaa u yimid nin faham qoto dheer oo ku saabsan Qorniinka iyo awoodaha mucjisada sheegta inuu yahay ina Ilaah. Qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha Yuhuuddu waxay u aqoonsadeen inuu yahay macallin xagga Ilaah ka yimid (Yooxanaa 3:2).
Laakiin wiilka Ilaah? Sidee buu keli ahaan iyo keli ahaanta Ilaah u noqon karaa aabbe iyo wiil? Yooxanaa 5:18 ayaa yidhi: "Taas waa sababta ay Yuhuuddu u sii dooneen inay dilaan isaga, maxaa yeelay isagu ma uusan jabinin sabtida oo keliya, laakiin wuxuu kaloo yidhi, Ilaah wuxuu ahaa aabihiis." Isaga ayaa wadaadkii sare haddana weyddiiyey, oo wuxuu ku yidhi, Miyaad tahay Masiixa oo ah Wiilka ammaantu? Laakiin Ciise wuxuu yidhi, Waa aniga; oo waxaad arki doontaan Wiilka Aadanaha oo fadhiya midigta xoogga, oo ku imanaya daruuraha cirka. Markaasaa wadaadkii sare dharkiisii ​​jeexjeexay oo yidhi, Maxaannu markhaatiyaal weli ugu baahan nahay? Waad maqashay cay. Waa maxay xukunkaagu? Kulligood waxay xukumeen inuu xukumay dilka " (Markos 14: 61-64).
"... iyo nacasnimada Giriigta"
Laakiin xitaa Gariigta waqtiga Ciise ma aqbali kareyn sheegashada uu Ciise sameeyay. Waxba, iyada ayaa lagu qanciyay, inay awooday inay xakameyso farqiga u dhexeeya weligiis lama beddeli karo iyo alaabada ku-meelgaarka ah. Oo sidaasay Giriiggu ku jees jeeseen hadalkii weynaa ee John ee soo socda: "Bilowgii wuxuu jiray Ereyga, Ereyguna wuxuu la jiray Ilaah, Ilaahna eray buu ahaa ... Ereyguna jidh buu noqday oo wuu ina dhex joogay, oo waxaan aragnay ammaantiisii "Waa ammaanta sida wiilka keliya ee aabbaha, ee nimco iyo run ka buuxa" (Yooxanaa 1: 1, 14). Kuma filna gaalnimada gaalada. Ma aha oo kaliya in Ilaah nin noqday oo uu dhintay, sidoo kale isaga ayaa laga soo sarakacay kuwii dhintay oo wuxuu ku soo noqday ammaankiisii ​​hore (Yooxanaa 17:5). Rasuul Bawlos wuxuu warqad u qoray Efesos in Ilaah “Masiixa ka sara kiciyey kuwii dhintay oo jannada midigtiisa jannada geliyey” (Efesos 1:20).
Bawlos wuxuu si cad uga hadlay naxdinta uu Ciise Masiix ku keenay Yuhuudda iyo Gariigta: “Maxaa yeelay adduunyada oo ay ku hareereysan tahay xigmadda Ilaah, Ilaah kuma aqoonsan xigmaddeeda, Ilaah wuxuu ku faraxsan yahay inuu khudbadda ku badbaadiyo nacasnimada. rumaysta taas, maxaa yeelay Yuhuuddu waxay weyddiistaan ​​calaamooyin, kuwa Gariiguna waxay weydiistaan ​​xigmad, laakiin waxaan ku wacdinnaa Masiixa iskutallaabta lagu qodbay, Yuhuuddu waxay buuqayaan nacasnimada iyo Gariigta nacasnimada ah. (1 Korintos 1: 21-23). Kaliya kuwa la yaqaan ayaa fahmi kara oo salaamaya warka cajiibka ah ee injiilka, Bawlos wuxuu sii wadaa; "Kuwa loogu yeedhay, Yuhuudda iyo Gariigta, waxaan u wacdinnaa Masiix inuu yahay xoogga Ilaah iyo xigmadda Ilaah. Waayo, nacasnimada Ilaah ayaa ka xigmad badan xigmadda dadka, itaal darrida Ilaahna way ka xoog badan tahay dadka." (Aayadaha 24-25). Iyo Rooma 1:16 Bawlos wuxuu ugu yeerayaa: "... Kama xishoodo injiilka, maxaa yeelay waa awooda Eebbe oo ka dhigaysa kuwa rumaysta oo dhan, marka hore Yuhuudda iyo Gariigta inay farxaan."
Anigu waxaan ahay albaabka
Intii lagu guda jiray noloshiisa dunidan, Ciise, ilaah binu-aadamka, wuxuu qarxiyay dad badan oo duq ah, oo jecel - laakiin khaldan - fikradaha ku saabsan waxa Ilaah yahay, sida Ilaah u nool yahay iyo waxa Ilaah doonayo. Wuxuu iftiimiyay runta ah in Axdigii Hore uu ka dhawaajiyay. Hadana wuxuu ku dhawaaqay
badbaado waa u suurtowdaa.
Wuxuu yidhi, "Anigu waxaan ahay jidka, runta iyo nolosha", ayuu ku dhawaaqay, "Ma jiro qof u yimaadda aabbaha laakiin aniga ila soo maro" (Yooxanaa 14:6). Iyo: "Anigu waxaan ahay geedka canabka ah, waxaad tihiin geedo canab ah. Ku alla kii igu jira oo anna waan ku jiraa baxsad badan, maxaa yeelay aniga la'aanteed waxba ma aad samayn kartid. oo waad soo qaadataa oo waxaad ku tuuri doontaa dabka, waana inay gubaan " (Yooxanaa 15: 5-6). Horaantii wuxuu yiri: "Anigu waxaan ahay albaab; hadii qof ila dhex galo waa la badbaadin doonaa ..." (Yooxanaa 10:9).
Ciise waa ilaah
Ciise ma tirtirin mucjisada hal-abuurka ah ee ka hadlay Sharciga Kunoqoshadiisa 5: 6 taas oo ku celcelinaysa Axdigii Hore oo dhan. Hase yeeshe, sida uusan u baabi'in sharciga, laakiin uu u kordhiyo (Matayos 5: 17, 21-22, 27-28), wuxuu hadda ku fidiyaa fikradda ah "mid" Ilaah qaab lama filaan ah. Wuxuu sharraxay: Waxaa jira mid keliya iyo Ilaah keliya, laakiin eraygu wuxuu la jiray Ilaah weligiis (Yooxanaa 1: 1-2). Ereygu wuxuu noqday jidhka - aadanaha oo dhan iyo isku Ilaah oo isku isku mar ah - oo iskiis iskudhaafay dhammaanba mudnaanta rabbaaniga ah. Ciise, "oo qaab Ilaah u ekaaday, uma u qaadanin inuu wax boob yahay oo uu la mid yahay kii Ilaah, laakiin halkii uu iska sii daayay oo uu u qaatay qaabka addoonka, oo uu u ekaaday sidii ragga iyo kii
Sida muuqata loo aqoonsan yahay aadanaha. Isagu is-hoosaysiiyey oo addeecay inuu dhinto, xataa inuu iskutallaabta ku dhinto " (Filiboy 2: 6-8).
Ciise wuxuu ahaa dhammaan aadanaha iyo dhammaan Ilaahay. Wuxuu faray dhammaan xoogga iyo awoodda Ilaah, laakiin wuxuu u gudbiyay xadadka ahaanshaha aadanaha aawadeen aawadood. Intii lagu gudajiray muddadan jidh ahaaneed isagu, wiilkii, wuxuu sii joogay "mid" aabihii. "Yaa i arka, wuxuu arkaa aabe!" wuxuu yidhi Ciise (Yooxanaa 14:9). "Waxba isma qaban karo, laakiin waxaan maqlayaa inaan xukumaa, xukunkayguna waa xaq, maxaa yeelay, anigu doondoon maayo, laakiin waxaan doonayaa doonista kii i soo diray." (Yooxanaa 5:30). Wuxuu yidhi isagu waxba kama uusan qaban naftiisa, laakiin wuxuu ula hadlay sidii aabbaha baray (Yooxanaa 8:28).
Wax yar ka hor iskutallaabta lagu qodbay, ka dib wuxuu xertiisii ​​u sharraxay: "Waxaan ka bilaabay Aabbaha oo aan imid dunida; Waxaan mar kale ka tegayaa dunida oo Aabbaha u tegayaa" (Yooxanaa 16:28). Ciise wuxuu u yimid dhulka inuu u dhinto dembiyadayada. Wuxuu u yimid inuu helo kaniisaddiisa. Wuxuu u yimid inuu bilaabo ku dhawaaqidda injiilka ee adduunka oo dhan. Oo wuxuu sidoo kale u yimid inuu dadka u muujiyo Ilaah. Gaar ahaan, wuxuu dadka ka dhigay inay ogaadaan xiriirka aabaha iyo wiilka uu ku dhex jiro ilaahnimada.
Tusaale ahaan, Injiilka Yooxanaa, wuxuu raadraacaa masaafado dhaadheer sida Ciise ugu muujiyo aabaha binu-aadmiga. Wada hadalkii Iidda Kormaridda Ciise waa mid xiiso gaar ah ka leh arrintan (Yooxanaa 13-17). Waa maxay aqoonta la yaab leh ee dabeecadda Ilaah! Xitaa ka sii yaabka badan ayaa ah muujinta Ciise ee ku saabsan cilaaqaadka Ilaah la doonayo ee ka dhexeeya Ilaah iyo dadka. Ninku wuu ka qaybqaadan karaa dabeecadda rabbaaniga ah! Ciise wuxuu xertiisii ​​ku yidhi: "Kii qaynuunnadayda haysta oo xajiya waa kan i jecel, laakiin kan i jecel wuxuu Aabbahay jeclaan doonaa, anna waan jeclaan doonaa isaga, waana isu muujin doonaa isaga" (Yooxanaa 14:21). Ilaah wuxuu rabaa inuu ku mideeyo nin iyada oo loo maro xidhiidh jacayl - jacayl nuuca ka dhexeeya aabaha iyo wiilka. Ilaah isu muujiyo dadka jacaylku ku dhex shaqeeyo. Ciise wuxuu ku sii daray: "Ku alla kii i jecel wuxuu ereygayga xajin doonaa, aabbahayna waa jeclaan doonaa isaga, waana u tagi doonnaa oo waan la joogi doonnaa. Waxa aad maqashid ma aha erayga, laakiin waxaa leh Aabbaha i soo diray
leeyahay " (Aayadaha 23-24).
Ku alla kii Ilaah ugu yimaadaa xagga rumaysadka xagga Ciise Masiix, oo naftiisa u dhiiba Ilaah aaminnimadiisa, Ilaah baa ku nool. Butros wuxuu wacdiyey: "Toobad keena, oo midkiin kastaaba waxaa laydinku baabtiisi doonaa magaca Ciise Masiix dembidhaafkiinna aawadiis, oo waxaad heli doontaan hadiyadda ah Ruuxa Quduuska ah" (Falimaha Rasuullada 2:38). Ruuxa Quduuska ahi sidoo kale waa Ilaah, sida aan ku arki doono cutubka soo socda. Bawlos wuxuu ogaa in Ilaah ku nool yahay: "Waxaa iskutallaabta laygula qodbay Masiixa, waan noolahay, laakiin ma ihi, laakiin Masiixu waa igu nool yahay. Maxaa yeelay, waxaan haatan jidhka ku noolahay, waxaan ku noolahay iimaanka xagga Wiilka Ilaah, kan aniga jecel yahay oo naftiisuu halkaas ii bixiyey " (Galatiya 2:20).
Nolosha Ilaah ee ku jirta aadanaha waa sida "dhalasho cusub", sida Ciise ku sharaxay Yooxanaa 3: 3. Iyada oo dhalashada ruuxiga ah ee qofku bilaabayo nolol cusub oo xagga Ilaah ah, wuxuu noqdaa muwaadin sokeeye oo ka mid ah quduusiinta iyo asxaabta Ilaahay (Efesos 2:19). Bawlos wuxuu qoray in Ilaah "inaga badbaadiyey xoogga gudcurka" wuxuuna "na geliyay boqortooyada Wiilkiisa qaaliga ah, kaas oo aan ku badbaadi karno, kaas oo ah cafiska dembiyada" (Kolosay 1: 13-14). Masiixiyiintu waa muwaadin Boqortooyada Ilaahay. "Saaxiibbada qaaliga ah, mar hore waxaan nahay carruurta Ilaah" (1 Yooxanaa 3:2). Ilaah si buuxda ayuu isugu muujiyay Ciise Masiix. "Maxaa yeelay dhammaan tirada badan ee ilaahnimadiisa ayuu ku dhex jiraa" (Kolosay 2: 9). Muxuu yahay waxyigani maxay anaga inoo tahay? Waxaan ku noqon karnaa iskaashi dabeecadda rabbaaniga ah!
Butros wuxuu soo gabagabeynayaa gunaanadka: «Waxkasta oo u adeega nolosha iyo cibaadada wuxuu ina siiyay awooddiisa rabbaaniga ah xagga aqoonta kuwa noogu yeedhay ammaantiisa iyo xooggeeda. Waxay na siinayaan ballanqaadyada ugu qaalisan uguna weyn, si aad u wadaagi kartaan dabeecadda rabbaaniga ah ee aad uga baxsatay damaca xun ee adduunka " (2 Butros 1: 3-4)
Masiixa - muujinta qumman ee Eebbe
Ilaa intee buu Ilaahay si gaar ah isugu muujiyay Ciise Masiix? Wax kasta oo uu u maleeyay oo fuliyey, Ciise wuxuu muujiyay dabeecadda Ilaah. Ciise wuu dhintay oo kuwii dhintay laga sara kiciyey si ninku u badbaadi karo oo ula heshiiyo Ilaah loona helo nolosha weligeed ah. Rooma 5: 10-11 wuxuu noo sheegayaa: "Maxaa yeelay haddii laygula heshiiyey dhimashadii wiilkiisa markii aan weli cadowgu ahayn, intee in ka badan baa noloshiisa badbaadin doonnaa hadda kadib markii aan heshiisiinno. Taasuna waa inaannu weliba ku faanaynno Ilaah xagga Ciise Masiix, kan aannu haatan heshiiska ku helnay.
Ciise wuxuu daaha ka qaaday qorshaha Eebbe inuu ku abuuro jaaliyad cusub oo ruuxiga ah kana gudubta xuduudaha iyo qarannimada - Kaniisada (Efesos 2: 14-22). Ciise wuxuu muujiyey Ilaah inuu yahay Aabaha dhammaan kuwa ku dhashay Masiixa. Ciise wuxuu shaaca ka qaaday ujeeddada qaaliga ah ee Eebbe u ballan qaaday dadkiisa. Jiritaanka Ruuxa Ilaah inagu dhex jira wuxuu mar hore ina siinayaa tixraac ku saabsan ammaanta mustaqbalkan. Ruuxu waa "ballan qaadkii dhaxalkeenna" (Efesos 1:14).
Ciise wuxuu kaloo ka marag kacay jiritaanka Aabaha iyo Wiilku inuu yahay Ilaah sidaa darteedna xaqiiqda ah in waxyaabo muhiim ah oo kaladuwan lagu muujiyay mid, Ilaahnimadiisa weligeed ah. Qorayaasha Axdiga Cusubi waxay u adeegsadeen magacyada Axdiga Hore mar labaad iyo mar labaad Masiixa. Markay sidaas samaynayaan, waxay keliya noogu markhaati fureen inuu Masiixu yahay, laakiin sidoo kale Ilaah yahay, maxaa yeelay, Ciise waa muujinta Aabbaha, isaga iyo Aabbuhuna waa isku mid. Waxaan waxbadan ka baranaa Ilaah markii aan baarno waxa Masiixu yahay.
5. Midkiiba saddex iyo saddex saddex
Waxbarista Eebbe, sidaan soo aragnay, wuxuu matalaa Baybalka si aan kala go 'lahayn. Imaanshaha Ciise iyo shaqadii Ciise waxay ina siiyeen fahan qoto dheer oo ku saabsan "sidee" Midnimada Ilaah. Axdiga Cusubi wuxuu cadeynayaa in Ciise Masiix yahay Ilaah iyo in Aabbuhu yahay Ilaah. Laakiin, sida aan arki doonno, waxay sidoo kale u taagan tahay Ruuxa Quduuska ah inuu yahay Ilaah - mid rabaani ah, weligiis ah. Taas macnaheedu waa: Baybalku wuxuu daaha ka qaadayaa Ilaaha weligiis jira sida Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Sidaas daraadeed Masiixiyiintu waa in lagu baabtiisaa "magaca Aabaha iyo kan Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah" (Matayos 28:19).
Qarniyo badan, tusaalooyin kala duwan oo sharraxaad ah ayaa soo ifbaxaya kuwaas oo ka dhigaya xaqiiqooyinka Baybalka in ay noqdaan kuwo la fahmi karo marka hore. Laakiin waa inaan ka taxadarnaa in aanaan aqbalin hadalada "albaabka dambe" ee ku xadgudbaya barista kitaabiga ah. Sababtoo ah sharraxa qaar ayaa si fudud arrinta u fududeyn kara maadaama ay ina siineyso muuqaal aad u macquul ah oo Ilaah caag ah. Laakiin waxa ugu muhiimsan waa haddii sharraxaaddu la jaanqaado Kitaabka Quduuska ah iyo in kale ama in ay iskii u taagan tahay oo joogto ah. Baybalku wuxuu muujinayaa in uu jiro hal - iyo hal - Ilaah haddana ina siiya isla mar ahaantaa Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah, oo weligood jira oo dhammaystira wax kasta oo Ilaah keligiis qaban karo.
"Saddexdiiba mid", "saddex ka mid ah" waa fikrado ka soo horjeeda caqliga aadanaha. Tusaale ahaan, way fududaan lahayd in la qiyaaso Ilaah inuu yahay “hal il”, iyadoo aan loo kala qaadin "Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah." Laakiin taasi maahan Ilaaha Kitaabka Quduuska ah. Sawir kale oo fudud ayaa ah "Ilaah Qoyska", oo ka kooban in ka badan hal xubin. Laakiin Ilaaha Kitaabka Quduuska ah aad buu uga duwan yahay wax kasta oo aan ku horumarin karno fekerkeenna iyo muujinta la'aan.
Ilaahay waxyaabo badan ayuu naftiisa ka muujiyaa, waana rumeysanahay, xitaa haddii aanan sharraxi karin dhammaantood. Tusaale ahaan, si qeexan uma sharixi karno sida Eebbe bilow u noqon karo bilow la'aan. Fikradda noocan oo kale ahi waxay dhaafaysaa jidkeenna xadidan. Kama sharixi karno arrintaas, laakiin waxaan ognahay inay run tahay in Ilaah uusan lahayn bilow. Baybalku wuxuu kaloo daaha ka qaadayaa in Ilaah yahay mid keliya oo keliya, laakiin sidoo kale Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah.
Ruuxa Quduuska ahi waa Ilaah
Falimaha Rasuullada 5: 3-4 wuxuu ugu yeeraa Ruuxa Quduuska ah "Ilaah": "Laakiin Butros wuxuu ku yidhi, Hananias, Muxuu Shayddaan u buuxiyey qalbigaaga oo ah inaad Ruuxa Quduuska ah been u sheegtay oo aad xoogaa lacag ah uga qaadatay beerta? Inaad haysatid oo aad sii haysatid markaad haysatid? Oo markii lagu iibiyayna miyaad samaysan kari weydeen waxaad doonayseen? Maxaadse ugu talo gashay inaad waxan qalbigaaga ku qabatid? Waxaad been u sheegtay Ilaah, dadka ma aha. Beenta Hananas ee Ruuxa Quduuska ah, sida uu sheegay Butros, been buu u ahaa Ilaah.
Axdiga Cusubi sifooyinkiisa ayuu u soo qaatay Ruuxa Quduuska ah oo Ilaahay keliya uu lahaan karo. Tusaale ahaan, Ruuxa Quduuska ahi wax walba wuu ogyahay. "Laakiin Ilaah baa inoogu muujiyey Ruuxiisa, waayo, Ruuxu wax walba wuu baadhaa, xataa waxyaalaha moolka dheer ee Ilaah" (1 Korintos 2:10).
Intaas waxaa sii dheer, Ruuxa Qudduuska ahu waa goobjoog ahaaneed, oo aan lahayn xuduudo xaddidan. "Ama miyaadan ogayn in jidhkaagu yahay macbudka Ruuxa Quduuska ah ee ku dhex jira oo aad adigu Ilaah ku leedahay oo aadan adigu naftaada iska lahayn?" (1 Korintos 6:19). Ruuxa Qudduuska ahi wuxuu ku dhex nool yahay rumaystayaasha oo dhan sidaas darteedna kuma koobna hal meel oo keliya. Ruuxa Quduuska ahi wuxuu cusbooneysiiyey Masiixiyiinta. "Qof haddaanu ku dhalan biyo iyo Ruuxa, kuma geli karo boqortooyada Ilaah. Waxa jidhka ka dhashaa waa jidh, waxa Ruuxa ka dhashaana waa ruux ... Meel alla meeshuu doonayoba waad ku maqli kartaa, oo jilibkiisa waad maqli kartaa, laakiin ma garanaysid meeshuu ka yimid iyo meesha uu ku socdo, waana isku mid qof kasta oo ka dhashay Ruuxa " (Yooxanaa 3: 5-6, 8). Wuxuu saadaaliyay mustaqbalka. "Laakiin Ruuxu wuxuu si cad u sheegayaa in waqtiyada ugu dambeeya, qaar ka mid ah ay ka dhici doonaan iimaanka oo ay u hoggaansan doonaan jinniyo sasabanaya iyo waxbarista jinniyo." (1 Timoteyos 4: 1). Qaaciddada baabtiiska, Ruuxa Quduuska ah waxaa loo meeleeyaa isla heerka aabaha iyo wiilka: Masiixiyiintu waa in la baabtiisaa "magaca aabaha iyo kan Wiilka iyo kan Ruuxa Quduuska ah" (Matayos 28:19). Maskaxda waxba kama abuuri karto (Sabuurradii 104:30). Kaliya Ilaah ayaa leh hadiyadaha hal-abuurka ah. Cibraaniyada 9:14 waxay siisaa erayga "weligiis" Ruuxa. Kaliya Ilaah waa weligiis.
Ciise wuxuu rasuulladii u ballanqaaday inuu yahay “qalbi qaboojin" markii uu baxay (Caawinaad) inay kula joogto weligeed "," ruuxa runta ah ee dunidu aysan heli karin maxaa yeelay ma aragto mana garanayso. Waad ogtahay sababtoo ah way kula joogi doontaa waana ku jir " (Yooxanaa 14: 16-17). Ciise wuxuu si cad ugu cadeeyay “raaxada inuu yahay Ruuxa Quduuska ah:“ Laakiin qalbi qabeyaha, Ruuxa Quduuska ah, oo aabbahay ku soo diri doono magacayga, wax kasta ayuu idin bari doonaa oo wuxuu idin xusuusin doonaa waxkasta oo aan kugu idhi ” (Aayadda 26). Adeegsaduhu wuxuu muujiyaa dembiyadooda adduunka oo uu nagu hanuuniyaa runta oo dhan; ficillada uu Ilaahay oo keliya samayn karo. Bawlos wuxuu xaqiijinayaa tan: "Waxaan sidoo kale ku hadlaynaa this, oo aan ku hadalno, oo aan ku hadalno, ee aan baray xigmadda aadanaha, laakiin aan ku bixino <words>, oo uu wax baray Ruuxa, annagoo ka tarjumayna ruuxiga ah ruuxiga" (1 Korintos 2:13, Elberfeld Bible).
Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah: Ilaah keliya
Markaynu garwaaqsanno inuu jiro hal Ilaah oo keliya iyo in Ruuxa Quduuska ahi uu Ilaah yahay, sida Aabbuhu yahay Ilaah yahay oo Wiilkuna yahay Ilaah, ma aha wax adag inaan annagu fahamno aayadaha sida Falimaha Rasuullada 13: 2: "Laakiin sidii Rabbigu leeyahay Ruuxa Quduuska ahu wuxuu yidhi waan adeegay oo soomay Luukos wuxuu si toos ah u arkaa shaqada Ruuxa Quduuska ah howsha Eebbe.
Haddaan u qaadanno muujinta Baybalka ee dabeecadda Eebbe ereygiisa, waa wax weyn. Markuu Ruuxa Quduuska ahi hadlo, dirayo, dhiirigaliyo, hanuuniyo, quduus ka dhigo, awood siinayo, ama hadiyado bixiyo, waa Ilaah kan sameeya. Laakiin maadaama Ilaah yahay mid saddex ah oo aan ahayn saddex waxyaalood oo kaladuwan, Ruuxa Quduuska ahi ma aha Ilaah madax-bannaan oo isagu kaligiis wax u qabsada.
Ilaah wuxuu leeyahay doonis, doonistii Aabbaha, taas oo lamid ah doonista wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Maahan wax ku saabsan laba ama saddex ilaah rabaani ah kuwaas oo si madaxbanaan u go'aansada inay si buuxda ugu wada noolaadaan. Saas ma aha, waa ilaah
iyo dardaaran. Wiilku Wuxuu Soo Bandhigaa Doonista Aabaha Sida laga soo xigtay, waa dabeecadda iyo shaqada Ruuxa Quduuska ah si loo dhammaystiro doonista Aabaha dhulka.
Sida laga soo xigtay Paul, "Sayidku waa Ruux" oo wuxuu wax ka qoraa "Sayidku waa Ruuxa" (2 Korintos 3: 17-18). Aayadda 6aad xitaa waxay leedahay, "Ruuxu wuxuu kaa dhigayaa mid nool," taas oo ah wax Ilaahay kaliya sameyn karo. Kaliya waxaan u aqaanaa Aabaha maxaa yeelay Ruuxu wuxuu awood inoo siiyaa inaan aamino inuu Ciise yahay Wiilka Ilaah. Ciise iyo Aabbuhu waxay inagu dhex nool yihiin, laakiin waa sababta oo ah Ruuxu inagu dhex jiro (Yooxanaa 14: 16-17, 23; Rooma 8: 9-11). Maadaama Ilaah yahay mid, Aabbaha iyo Wiilkuna sidoo kale way inagu jiraan marka Ruuxu inagu jiro.
1 Korintos 12: 4-11, Bawlos wuxuu isla mid yahay Ruuxa, Rabbiga iyo Ilaah midba midka kale. Waa "Ilaah ka shaqeeya qof walba", ayuu ku qoray aayadda 6aad. Laakiin dhawr aayood oo dheeri ah ayaa odhanaya: "Laakiin waxaas oo dhan waxay ku shaqeeyaan isku ruux", oo ah "sida uu isagu [ruuxa] doonayo". Sidee maskaxdu wax u rabto? Eebbe ahaw. Oo maadaama uu jiro hal Ilaah oo keliya, doonista aabaha sidoo kale waa doonista wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah.
In lagu caabudo Ilaah micnaheedu waa in lagu caabudo Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah, maxaa yeelay iyagu waa Ilaah keliya oo keliya. Ma xoojin karno Ruuxa Quduuska ah oo aan ku caabudno sida madaxbanaan. Ma aha Ruuxa Quduuska ah sida oo kale, laakiin waa Ilaaha Aabbaha, Wiilka iyo Quduuska
Cibaadadayadu waa inay ahaataa mid isku wada mid ah. Ilaahow anaga (Ruuxa Quduuska ah) wuxuu nagu dhaqaajiyaa inaan caabudno Ilaah. Raaxeeyaha (sida wiilka) kama hadlayo "laftiisa" (Yooxanaa 16:13), laakiin wuxuu sheegayaa waxa aabbuhu ku siinayo. Isagu nooguma tilmaamayo qudhiisa, laakiin aabaha xagga wiilka. Mana u baryeynno Ruuxa Quduuska ah sidan oo kale - waa Ruuxa inagu dhex jira oo naga caawiya tukashada oo xitaa inoo duceeya annaga (Rooma 8:26).
Hadduusan ahaan lahayn Ilaah dhexdeena, weligeen sinaba uma noqon doontid Ilaah. Haddii uusan Eebbe nagu jirin, annagu ma noqon lahayn Ilaah ama Wiil ogaada (isaga). Taasina waa sababta aan u leenahay badbaadada ee loo sugo Ilaaha oo keliya, annaga oo keliyana. Midhaha aannu dhalinno waa midhaha Ruuxa Ilaah ee midhaha, oo aan midkeenna ahayn. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku raaxeysanahay mudnaanta weyn ee loo oggolaaday inaan ka shaqeyno shaqada Ilaah, haddii aan rabno.
Aabuhu waa abuuraha iyo isha wax walba. Wiilku waa Bixiyaha, Badbaadiyaha, waa qaybta fulinta ee Eebbe wax walba ku abuuray. Ruuxa Quduuska ahi waa qalbi qaboojinta iyo u doodidda. Ruuxa Quduuska ahi waa Ilaah ee innaga ina hogaamiya xagga Aabbaha xagga Wiilka. Waxaa daahirsanaaday oo ina badbaadiyey wiilka si aan xiriir u yeelanno isaga iyo aabaha. Ruuxa Quduuska ahi wuxuu saameeyaa qalbiyadeena iyo maskaxdeena wuxuuna na hogaamiyaa inaan rumeysano ciise masiix, taas oo ah wadada iyo albaabka. Ruuxu wuxuu ina siiyaa hadiyado, hadiyado Eebbe, kaas oo caqiidada, rajada iyo jacaylka aaney yareyn.
Waxaas oo dhami waa shaqadii hal ilaahay oo naftiisa noogu muujiyey Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Isagu ma jiro ilaah kale oo aan ahayn Ilaaha Axdiga Hore, laakiin wax badan ayaa isaga laga muujiyey isaga xagga Axdiga Cusub: Wiilkiisii ​​ayuu u soo diray sidii nin inuu dhinto dembiyadeenna iyo sarakiciddiisa, oo wuxuu noogu soo diray ruuxiisa - kan qalbi qaboojiya. - kan innaga dhex deggan, oo na hoggaamiya runta oo dhan, oo na siiya hadiyado, isla markaana ku habboonaanta ekaanta Masiixa.
Markaan tukanayno, ujeedadayadu waa in Ilaah ka jawaabo baryadayada; laakiinse Ilaah waa inuu nagu hoggaamiyo yoolalkaas, isaguna waa xataa jidka loo maro yoolkeenna. Si kale haddii loo dhigo: ilaaha waan u duceyneynaa (aabe); Ilaahow anaga (Ruuxa Quduuska ah) ayaa ah waxa ina tukanaaya; Ilaahna waa jidka sidoo kale (ina) kaas oo aan ku hogaamino yoolkaas.
Aabuhu wuxuu bilaabayaa qorshaha badbaadada. Wiilku wuxuu dejiyaa qorshaha dib-u-heshiisiinta iyo madaxfurashada aadanaha oo wuu fuliyaa isaga laftiisa. Ruuxa Quduuska ahi wuxuu keenaa barakada - hadiyadaha - badbaadada, oo markaa keenaya badbaadada rumaystayaasha aaminka ah. Waxaas oo dhami waa shaqadii hal Ilaah, oo ah Ilaaha Kitaabka Quduuska ah.
Bawlos wuxuu xirmay warqaddii labaad ee uu u diray Korintos isagoo duco ah: "Nimcada Rabbigeenna Ciise Masiix iyo jacaylka Ilaah iyo wehelnimada Ruuxa Quduuska ahu kulligiin ha idinla jireen." (2 Korintos 13:13). Diiradu waxay saaran tahay jacaylka Ilaah ee aan ku helno nimcadda uu Ilaah ku siinayo Ciise Masiix iyo midnimada iyo wadaagga lala yeesho Ilaah iyo midba midka kale ee uu ku siiyo Ruuxa Quduuska ah.
Immisa "dad" ah ayuu Eebbe ka kooban yahay?
Dad badan ayaa fikir aan caadi ahayn ka haysan waxa Kitaabka Quduuska ahi ka sheegayo midnimada Ilaah. Intooda badan kama fikiraan. Qaar ayaa qiyaasaya seddex abuur oo madax-bannaan; qaar ka mid ahaansho leh saddex madax; kuwa kale oo u rogi kara Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah ee doonista. Kani waa xulasho yar oo laga soo qaaday sawirrada caanka ah.
Kuwo badani waxay isku dayaan inay ku dhigaan waxbarista Baybalka ah ee ku saabsan Ilaah ereyada "saddex," Saddexmidnimada "ama" Saddexnimada "Si kastaba ha noqotee, haddii aad weydiiso waxa Kitaabka Quduuska ah ka leeyahay, waa inaad bixisaa sharraxaad. Muuqaalka Saddex-geeska ah ee dad badan ayaa kitaab ahaan ku saleysan cagaha dhoobo ah, waana sabab muhiim ah oo caddayn la'aanta loo muujinayo isticmaalka erayga "qof".
Ereyga "qof" ee loo adeegsaday qeexitaannada Jarmalka ee woxoogaa Saddexanka ah ayaa muujinaya saddex noole. Tusaalooyin: "Kan ilaah wuxuu ku jiraa sedex qof ... oo ah hal dabeecad rabbaaniga ah ... Seddexdan qof ayaa ah (dhab) midba midka kale wuu ka duwan yahay " (Rahner / Vorgrimler, IQ of the Dictionary Dictionary, Freiburg 1961, bogga 79). Marka loo eego Ilaah, macnaha guud ee erayga "qof" wuxuu gudbiyaa sawir qalloocan: taas oo ah aragtida ah in Ilaah xadidan yahay oo saddexannimadiisu ay ka dhalatay xaqiiqda ah inuu ka kooban yahay saddex waxyaalood oo madax-bannaan. Taasi maahan.
Ereyga Jarmalka "shaqsi" wuxuu ka yimid shaqsiyada Latinka. Luqadda fiqi ahaaneed ee Latinka, persona waxaa loo isticmaalay in lagu tilmaamo Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah, laakiin dareen ahaan ka duwan kan erayga Jarmalka "qof" maanta leeyahay. Micnaha aasaasiga ah ee qofka wuxuu ahaa "maaskaro". Muuqaal ahaan, waxay ku qeexday door ciyaar, waqtigaas, jilaa wuxuu ka soo muuqday hal ciyaar dhowr kaalimood, door walbana wuxuu xirtay maaskaro gaar ah. Laakiin xitaa ereygan, inkasta oo uusan oggolaanaynin in si khaldan loo muujiyo saddex bini-aadam inay soo baxaan, weli waa daciifnimo iyo marin habaabin la xiriirta Ilaah. Marin habaabin maxaa yeelay aabbaha, wiilka, iyo Ruuxa Quduuska ahi way ka badan yihiin doorarka uu Eebbe qaato, iyo maxaa yeelay jilaa kaliya hal door ayuu ciyaari karaa marba, halka Ilaah had iyo goor yahay Aabbaha, Wiilka, iyo Ruuxa Quduuska ah. Waxay noqon kartaa inuu nin fiqi Latin ah ula jeeday waxa saxda ah markii uu isticmaalay ereyga persona. Si kastaba ha noqotee, uma badna in cidda wax xaraysaa u fahmi lahayd si sax ah. Xitaa maanta, ereyga "qof", tixraaca Ilaah, wuxuu si fudud u horseedaa qofka celceliska ah marinnada khaldan haddii aan la soconin sharraxaadda in qofku leeyahay inuu qiyaasi karo wax gabi ahaanba ka hooseeya "qof" ee godhead ka hooseeya "qofka" gudaha dareenka aadanaha.
Qof kasta oo ku hadla afkeenna ilaah seddex qof ma caawin karo laakiin qiyaaso seddex ilaah oo madax-bannaan. Si kale haddii loo dhigo, isagu ma kala saari doono ereyada "qof" iyo "ahaansho". Laakiin taasi maahan sida Eebbe loogu muujiyay Kitaabka Quduuska ah. Waxaa jira Ilaah keliya, oo aan saddex ahayn. Baybalku wuxuu daaha ka qaadayaa in Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ahi, iyagoo midba midka kale ka shaqeynaya, ay tahay in loo fahmo inay yihiin, xaalad weligeed ah oo ka mid ah Ilaaha runta ah ee Baybalka.
Hal ilaah: saddex hypostases
Haddii aan rabno inaan muujino runta kitaabiga ah ee ah in Eebbe yahay "mid" iyo "saddex" isku waqti, waa inaan raadino ereyo aan bixinaynin muuqaalka ah inay jiraan seddex ilaah ama seddex ilaah oo madax bannaan. Kitaabka Quduuska ahi wuxuu farayaa in uusan ku xadgudbin midnimada Ilaah. Dhibaatadu waa: dhamaan ereyada tilmaamaya waxa la abuuray, qeybo ka mid ah luuqada akhlaaqda xun oo noqon kara mid marin habaabin ah. Erayada badankood, oo ay kujiraan ereyga "qof", waxay u janjeedhaan inay la ekaadaan dabeecadda Eebbe iyo nidaamka la abuuray. Dhanka kale, dhamaan ereyadayada waxay laxiriiraan nidaamka loo abuuray qaab ama qaab kale. Sidaa daraadeed waa muhiim in si cad loo caddeeyo waxaan ula jeedno iyo waxa aannan u jeedin markii aan Ilaah kaga hadlayno ereyada aadanaha. Erey waxtar leh - sawir kaas oo Masiixiyiin ku hadla Griiga ay dhigayaan midnimada iyo midnimada Ilaah oo laga heli karo Cibraaniyada 1: 3. Qoraalkani waa mid siyaabo badan loo adeegsado. Waxay u qornayd: "Isagu [wiilku] waa ka-ekaanta ammaanta Ilaahiisa iyo sumcadda jiritaankiisa, wax walbana ereygiisa xoogga leh ku xambaara ..." Qaab-dhismeedka "milicsiga [ama shucaaca] ammaanta ammaanta” waxaan ku kasban karnaa dhowr aragtiyo laga gooyo: wiilku ma aha ka duwanaan aabihiis. Wiilku waa mid aan ka yaraynin aabaha. Wiilkuna waa weligiis, sida aabbe u yahay. Si kale haddii loo dhigo, wiilku wuxuu u dhaqmaa aabaha, sida milicsiga ama shucaaca uu ula xiriiro sharafta: shucaac la'aan, ma jiro shucaac, ilays la'aan, ilaha shucaaca. Hadana waa inaan kala saarno sharafta Ilaah iyo iftiinka ammaanta leh. Way kala duwan yihiin, laakiin ma kala saaraan. Sida aasaaska u ah ereyga "muuqaalka [ama sumcadda, dabeecadda, muuqaalka] jiritaankiisa". Aabuhu si buuxda oo buuxda ayuu ugu muujiyay wiilka.
Aynu haddaba u rogno erayga Griigga, oo u taagan "nuxurka" qoraalka asalka ah. Waa hypostasis. Waxay ka kooban tahay "hypo =" under "iyo stasis =" taagan "oo leh macnaha aasaasiga ah ee" wax ka hooseeya wax ". Waxa loola jeedaa waa maxay - sida aan dhihi lahayn - ayaa "gadaal ka taagan" wax, tusaale ahaan sameynta waxa ay tahay. Hypostasis waxaa lagu qeexi karaa "wax aan jirin oo mid kale jiri karin". Waxaad ku qeexi kartaa sida "sabab noqoshada", "sabab noqo ahaanshaha".
Ilaah waa shakhsi
"Hypostasis" (Jamac: "hypostases") waa eray fiican oo loogu talagalay Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Waa eray Baybal ah oo wuxuu siinayaa kala goyn xagga maskaxda ah oo udhaxeysa dabeecadda Eebbe iyo nidaamka la abuuray. Si kastaba ha noqotee, "qof" ayaa sidoo kale ku habboon, kaas oo hoosta ka jira (lama huraan ah) shuruud ah in ereyga aan lagu fahmin dareenka aadanaha-shakhsi ahaaneed.
Hal sabab oo "qof" - si sax ah loo fahmo - ay ku habboon tahay ayaa ah in Ilaah si qotodheer ula noolaado. Marka waxaa khalad ah in la dhaho waa qof aan shaqsi aheyn. Uma caabudno dhagxaanta iyo dhir, ama annaguna shaqsi ahaan mayno "gadaasha cosmos", laakiin waxaan nahay "qof nool". Ilaah waa mid shaqsi ahaaneed, laakiin ma ahan qof dareenka ah inaannu nahay shakhsiyaad. Maxaa yeelay, anigu waxaan ahay Ilaah ee ma ahi nin ee waxaan ahay Quduuska idinka dhex ah (Hoosheeca 11: 9). Eebbe waa abuuraha - mana aha qayb ka mid ah kuwa la abuuray. Dadku waxay leeyihiin bilow nololeed, jir bay leeyihiin, weynaadaan, wey ku kala duwan yihiin, da 'ugu dambeyntiina way dhintaan. Ilaah waa ka sarreeyaa waxaas oo dhan, oo weliba si shaqsi ahaaneed ayuu ugula dhaqmaa xiriirka uu la leeyahay dadka.
Ilaahay wuu ka gudbay waxkasta oo afku soo saari karo; hase yeeshe isagu waa shaqsiyan wuxuuna si qoto dheer noo jecel yahay. Wuxuu leeyahay gadhka wax badan ee naftiisa ku saabsan, laakiin kama aamuso waxkasta oo ka gudba xadka aqoonta aadanaha. Maaddaama ay yihiin nooleyaal dhameystiran ma fahmi karno waxa ugu dambeeya. Wu · wuu aqoonsan karaa Ilaah muuqaalka guud ee muujinta, laakiin uma aqoonsan karno si buuxda sababta oo ah waxaan nahay dad dhambaal ah oo isagu aan xad lahayn. Wixii Eebbe noogu muujiyey waa dhab. Waa run. Waa muhiim.
Eebbe wuxuu noogu yeerayaa: "laakiin ku kora nimcada iyo aqoonta Rabbigeenna ah Badbaadiyeheenna Ciise Masiix" (2 Butros 3:18). Ciise wuxuu yiri: "Laakiin kanu waa nolosha weligeed ah inay ku gartaan, kan aad tahay Ilaaha keliya ee runta ah, iyo kii aad soo dirtay, Ciise Masiix." (Yooxanaa 17:3). Markii aan sii aqoonsanno Ilaahay, waxaa si cad noo noqonaya annaga sida aan u yar nahay iyo sida aan u weyn nahay
6. Xiriirka Aadanaha Eebbe
Hordhaca, waxaan isku daynay inaanu ka sameysano su'aalaha aasaasiga ah ee buugyarahan in ninku Ilaah weydiisto. Maxaan weydiin lahayn haddii aan xor u nahay inaan weydiinno su’aashaas oo kale? Su’aasheena xariiqda ayaa ah "yaad tahay?" wuxuu ka jawaabayaa abuuraha iyo xukumaha cosmos-ka isagoo leh: "Waxaan noqonayaa cidda aan noqon doono" (Baxniintii 2:3) ama "Anigu waxaan ahay" (Tarjumaadda tirada). Eebbe naftiisa ayaa noo sharraxay abuurista (Sabuurradii 19:2). Tan iyo wakhtigii uu ina sameeyay, wuxuu la macaamilay aadna ula macaamilay aadanaha. Mararka qaarkood sida onkod iyo hillaac, sida duufaan, sida dhulgariir iyo dab, mararka qaar sida "aamusnaan, aamusnaan" (Baxniintii 2:20; 18 Boqoradii 1: 19-11) Xitaa wuu qoslaa (Sabuurradii 2:4). Diiwaanka Baybalka, Ilaah wuxuu ka hadlayaa naftiisa oo wuxuu ku sifeynayaa aragtidiisa ku saabsan dadka uu si toos ah ula kulmay. Ilaah wuxuu isku muujiyay Ciise Masiix iyo Ruuxa Quduuska ah.
Hadda kaliya ma rabno inaan ogaanno cidda Ilaah yahay. Waxaan kaloo rabnaa inaan ogaano wuxuu isagu noo abuuray. Waxaan rabnaa inaan ogaano waxa qorshihiisu yahay annaga. Waxaan rabnaa inaan ogaano waxa mustaqbal inoogu diyaar ah. Waa maxay xiriirka naga dhexeeya Ilaah? Waa kuwee "inay tahay" inaan lahaano? Midkee ayaan yeelan doonnaa mustaqbalka? Eebbe wuxuu inaga sameeyay araggiisa (Bilowgii 1: 1-26). Mustaqbalkeenna, Kitaabka Quduuska ah - oo mararka qaarkood si muuqata aad u cad - ayaa shaaca ka qaadaya waxyaabo aad uga sarreeya oo aan hadda ku riyoon karno inay yihiin nooleyaal xaddidan.
Halka aan hadda joogno
Cibraaniyada 2: 6-11 wuxuu inoo sheegayaa in aan hadda ka yar nahay 'ka hooseeya' malaa'igaha. Laakiin Eebbe wuxuu ina siiyay "sharaf iyo maamuus" wuxuuna naga yeelay dhammaan abuurista. Mustaqbalka "ma haysto wax aan ka ahayn wuxuu isagu [aadanaha uusan u hoggaansanayn]. Laakiin hadda ma aragno in wax walba hoostiisa isaga ku hoos jiraan." Ilaah wuxuu inoo diyaariyay mustaqbal weligiis iyo mustaqbal leh. Laakiin wali waxbaa jira. Waxaan ku jirnaa xaalad dambi ah, dembiyadeenna ayaa naga go'ay Ilaah (Ishacyaah 59: 1-2). Dembigu wuxuu abuuray caqabad aan loo adkaysan karin oo inaga dhexaysa Ilaah iyo innaga, taas oo ah caqabad aan annagu keligeenna kaga adkaan karin.
Asal ahaan, si kastaba ha noqotee, nasashada ayaa durba bogsatay. Ciise wuxuu dhadhamiyay dhimashada annaga (Cibraaniyada 2:9). Wuxuu bixiyay ciqaabta dilka, taas oo aan ku soo oognay dembiyadayada si uu ugu hoggaamiyo "wiilal badan oo sharaf leh" (Aayadda 10). Sida ku xusan Muujintii 21: 7, Ilaah wuxuu inaga doonayaa inaan ku jirno xiriir aabe iyo caruur ah. Maxaa yeelay isagu wuu jecel yahay oo wax walbana wuu inoo qabtay - oo isagu wali wuxuu asal u yahay badbaadadeenna - Ciise xishoodkiisu waa inuu noogu yeedhaa sawirro (Cibraaniyada 2: 10-11).
Waxa hadda nalooga baahan yahay
Falimaha Rasuullada 2:38 waxay noogu yeeraysaa inaan ka toobadkeenno dambiyadayada oo ay na baabtiiso, tusaale ahaan, inaan aasno. Ilaah wuxuu Ruuxa Quduuska ah siiyaa kuwa rumeysan in Ciise Masiix yahay Badbaadiyahooda, Sayidkooda iyo Boqorka (Galatiya 3: 2-5). Markaan ka qoomameyno - kana leexano damac-xumada, adduunyada-dembiyada adduunka ee aan ku socon jirnay - waxaan bilaabeynaa inaan xiriir cusub la lahaano isaga. Waxaan dhalannay mar labaad (Yooxanaa 3: 3), nolol cusub oo Masiixa ku jirta ayaa na siiyay Ruuxa Quduuska ah, oo lagu beddelay Ruuxa xagga nimcada Ilaah iyo naxariistiisa iyo shaqada badbaadada Masiixa. Hadana? Kadib waxaan ku koray "nimcada iyo aqoonta Rabbigeenna ah Badbaadiyeheenna Ciise Masiix" (2 Butros 3:18) ilaa dhamaadka nolosha. Waxaa naga go'an inaan kaqeybqaadno sarakicidda koowaad, intaas kadib waxaan "Rabbiga la jiri doonnaa markasta" (1 Tesaloniika 4: 13-17).
Dhaxalkeenna aan la tirin karin
Ilaah wuxuu "dib noogu soo nooleeyay ... rajo rajo ah oo xagga sarakicidda Ciise Masiix kuwii dhintay, iyo dhaxal aan la tebi karin oo aan xasilloonayn oo laga tegi karo", dhaxal "kaas oo xoogga Ilaah ... muujiyey wakhtiga ugu dambeeya" (1 Butros 1: 3-5) Sarakicidda sarakicidda waxaynu noqonaa dhimasho la'aan (1 Korintos 15:54) oo waxaad heshaa "jirka ruuxiga ah" (Aayadda 44). Aayadda 49, "iyo sida aan u qaadnay aragtida muuqaalka dunida [Aadanaha aadanaha], marka waxaan u qaadan doonnaa sawirka jannada." Hadda wixii ka dambeeya, innagoo ah "carruurta sarakicidda", dib dambe ugama noqon doonno dhimasho (Luukos 20:36).
Ma jiraan wax ka sii sharaf badan wixii Kitaabka Quduuska ah ka sheega ee ku saabsan Ilaah iyo xiriirka mustaqbalkeenna lala lahaan doono? Waxaan noqon doonnaa 'isaga [Ciise] maxaa yeelay waxaan arki doonnaa isaga siduu yahay ” (1 Yooxanaa 3:2). Muujintii 21: 3 wuxuu balan qaadayaa waqtiga jannada cusub iyo kan cusub: "Bal eeg, buulkii Ilaah oo uu dadka la fadhiisto, wuu la joogayaa, oo iyana dad bay ahaan doonaan, isaga qudhiisuna wuu la jiri doonaa Ilaah. Ilaahood ha noqdo ... "
Waxaan la mid noqon doonnaa Ilaah - xagga quduusnimada, jacaylka, kaamilnimada, caddaaladda iyo ruuxa. Isaga oo ah carruurtiisa aan dhimaneyn, waxaan u sameysan doonnaa reerka Ilaah caqli buuxa. Waxaan si buuxda ula wadaagi doonnaa wehelnimo isaga farxad farxad leh. Waa wax weyn oo dhiirigelin leh
Ilaah wuxuu u diyaariyey farriinta rajo iyo badbaadada weligeed ah oo kuwa rumeysan oo dhan!